इमेज साप्ताहिक : 2019-11-10
प्रकाशक : कपिलदेव खनाल, सम्पादक : शर्मिला उप्रेती, सह–सम्पादक : सुजित भण्डारी, प्रमुख समाचारदाता : प्रितिका थापा, कार्यालय : विदुर नपा– ४ विदुर नुवाकोट, फोन नं. ०१०५६१६७८,९८५१०९३२९० email : imageweekly@gmail.com
३७ सय लाभग्राही हराए
विदुर/नुवाकोटमा भूकम्पको कारण घरको क्षति भएर लाभग्राही सूचीमा परेका ३७ सय भन्दा बढी लाभग्राही सरकारी सम्पर्कबाट हराएका छन् ।
२०७२ साल बैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पको कारण घरमा क्षति ब्यहोरेका पीडितलाई सरकारले लाभग्राही सूचीमा समावेश गरेर नयाँ घर बनाउनको लागी तीन लाख रुपैयाँ दिने जनाएपनि नुवाकोटका ३ हजार ७५८ लाभग्राही सम्पकमा नै नआएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वय इकाईले जनाएको छ ।
कविलासमा भुकम्पपछि पुनर्निर्माण भएको एक घर । तस्बिर : इमेज
भूकम्प पीडित लाभग्राही सूचीमा परेका धनीले स्थानीय सरकार समक्ष तोकिएको मापदण्ड अनुसार घर निर्माण सम्झौता गरेपछि उनीहरूलाई पहिलो किस्ता बापतको ५० हजार रुपैयाँ दिने भएपनि सम्झौता गर्न एवं रकम लिन नै नआएको अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालय नुवाकोटले जनायो । नुवाकोटमा ७६ हजार ८०९ घरधुरी लाभग्राही भएपनि अहिलेसम्म ७३ हजार ५१ परिवारले मात्र नयाँ घर निर्माणको लागी सम्झौता गरेर पहिलो किस्ता बापतको सरकारी अनुदान लिएका छन् । ४ वर्ष बित्दापनि नुवाकोटमा पुननिर्माणले कार्य सन्तोषजनक रुपमा अगाडी बढ्न नसकेकोमा सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
यसरी घरमा क्षती भएको भन्दै सरकारी सूचीमा नाम रहेर पनि रकम लिन सम्पर्कमा नआउनुले उनीहरु नक्कली भुकम्प पिडित रहेको अनुमान गरिएको छ । पहिलो किस्ता रकम लिएपछि घरको तयार गर्नुपर्ने संरचना नभएकै कारण उनीहरु थप रकम लिनका लागि नआएकोले यत्तिको संख्यामा लाभग्राहीहरु हराएको अनुमान गरिएको छ ।
इमेज साप्ताहिक image weekly (इमेज साप्ताहिक) at Sunday, November 10, 2019 No comments:
‘काम यथास्थितिमा राख्नु’
विदुर/गल्छि–त्रिशुली–बेत्रावती–मैलुङ्ग सडक आयोजनालाई काम यथास्थितिमा राख्न सर्वाेच्च अदालतले आदेश गरेको छ । अहिले जे भईरहेको हो त्यही अवस्थामा कात्तिक २६ गतेसम्मलाई राख्नका लागि अदालतबाट आदेश आएको हो । काम नियमित हुने वा रोकिने चाँहि २६ गते थाहा हुनेछ । न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल ईजलासले आयोजनालाई काम यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएको हो । २६ गते दुवै पक्षलालई बोलाएर छलफल गराउने भएकोले उक्त दिन तोकिएको हो । विदुर नगरपालिका वडा नम्बर १० गेर्खुटारका नारायणप्रसाद प्याकुरेलले सडक आयोजनाले मुअब्जा वितरण न्यायोचित नगरेको भन्दै रिट दायर गरेका छन् ।
विदुर/बेलकोटगढी नपा वडा नं २ (कुमरी) का सदस्य सान्नानी सुनारको मृत्यु भएको छ ।
६१ वर्षको उमेरमा उनको मृत्यु भएको हो । विभिन्न रोगको कारण बिरामी सुनार काठमाडौमा उपचार गराएर केही दिन अघि घर फर्किएका थिए । उनी २०७४ साल बैशाख ३१ मा भएको निर्वाचनमा तत्कालिन नेकपा एमालेको तर्फबाट महिला दलित वडा सदस्य पदमा निर्वाचत भएका थिए ।
१२२ मुद्दा किनारा लाग्यो
न्यायाधीश उमेशप्रसाद लुईटेल
विदुर/तीन महिना अघि कास्कीबाट नुवाकोट सरुवा भई आएका जिल्ला न्यायाधीश उमेशप्रसाद लुईटेलले शुक्रवार पत्रकारहरूसंग भेटघाट गरेका छन् । अदालतको हालसम्मको कार्य प्रगती विवरण सार्वजनिक गर्न तथा अदालत प्रति पत्रकारहरूको धारणा सुन्नका लागि जिल्ला अदालतले कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । विगतमा विभिन्न घटनामा जोडिएको अदालत, अदालतका कर्मचारी र नुवाकोटका जिल्ला न्यायाधीशको छवी विस्तारै सुधार हुँदै आएको प्रतिक्रृया पत्रकारहरूले दिए ।
यसै बीच, नुवाकोट जिल्ला अदालतले चालु आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमासिकमा १२२ थान मुद्दाको किनारा लगाएको छ । गत बर्षहरूको लगत सरेर आएको सहित ५३५ थान मुद्दा रहेकोमा हालसम्म १२२ थान मुद्दाको फैसला भएको श्रेष्तेदार शिबप्रसाद बञ्जाराले सुनाए । उनका अनुसार कम कर्मचारीका कारण अदालतमा मुद्दा र कामको चाप बढेको छ ।
न्यायाधीश उमेशप्रसाद लुईटेलले जिल्ला अदालतका केही वेतिथिहरूको सुधार गर्दै काम थालिएको बताए । नागरिकहरूलाई सक्दो छिट्टो न्याय दिन आफु र कार्यालय लागिरहेको सुनाए । ‘जनताले तत्कालै अनुभत गर्ने गरी हामी काम गर्नेछौं’ न्यायाधीश लुईटेलले भने ।
जिल्ला अदालत नुवाकोट बार ईकाई अध्यक्ष देबराज कँडेलले पछिल्लो समय न्यायका लागि अदालत आउने नागरिकहरूले सहजता महशुस गरिरहेको सुनाए । ‘हिजोका केही मस्या र नराम्रा कुराका कारण अहिले राम्रो र परिर्वनत देखिएको छ, कँडेलले भने– कुनै पनि कारण र बहानामा न्याय मर्न हुन्न, जिल्लाक ानागरिकहरूले न्याय पाउने विषयमा सबै पक्ष सम्वेदनशील बन्नुपर्छ ।’ नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा नुवाकोटका अध्यक्ष कपिलदेव खनालले अदालत, सरकारी वकिलको कार्यालयले नागरिकहरूलाई निःशुल्क प्रदान गर्ने सेवाका बारेमा धेरै नागरिक जानकार नरहेको बताए ।
काट्ने बेलामा बाला पनि लागेन
विदुर/धेरै फल्ने अनुमानमा उन्नत धानको बीउ लगाएका तारकेश्वर गाउँपालिका ४ बुधसिङ चारघरेका किसानहरू धान काट्ने बेलासम्म बालै नलागेपछि चिन्तित छन् ।
३ रोपनीमा गरिमा हाइब्रिड जातको धानको बीउ लगाएकोमा अहिले धान काट्ने बेलासम्ममा पनि बाला नलागे पछी किसानहरू चिन्तित भएको रमेशपुकार वस्तीले बताए । उनी पनि यही समस्इामा परेका छन् । त्यसो त उनी मात्र नभई छिमेक विष्णुबहादुर पुडासैनीले पनि त्यही जातको बीउ लगाएका थिए ।
उनीहरूले यही गाउँको एग्रिगेट पसलबाट धानको बीउ ल्याएर लगाएका थिए । अरू जात लगाउनेले धान भित्र्र्याइसकेका छन् । उनीहरूको खेतमा भने भर्खरै कतै कतै मात्रै धान निस्किन थालेको छ ।
उता, नुवाकोटको लिखु गाउँपालिका ५थानसिङ, पञ्चकन्या गाउँपालिका २ मिश्रफाँट, वडा ५ भद्रुटार, शिवपुरी गाउँपालिका ५, ६, ८ वडाका सुनखानी, गुरुङगाउ, थानापति, बेलकोटगढी नगरपालिका ७ र ८ को रातोमाटे, जिलिङ, तारकेश्वर गाउँपालिका १ दाङसिङ, ४ को बुधसिङ चारघरे, ढकालथोक, विदुर नगरपालिका ३ लगायतका स्थानमा पनि उही धानखेती गरिएको छ । त्यहा पनि यस्ता समस्या रहेको बताइएको छ ।
कृषि ज्ञान केन्द्र नुवाकोटमा अहिले उक्त धान लगाइएको क्षेत्रको लगत लिने कार्य भइरहेको जनाइएको छ । अहिले सम्बन्धित स्थानिय तहबाट केन्द्रले लगत संकलन गरिरहेको छ ।
साना शहरीको ९० प्रतिशत काम !
विदुर/विदुर नगरवासीलाई स्वच्छ पानी खुवाउने लक्ष्य सहित निर्माण भइरहेको विदुर तेस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको काम ९० प्रतिशत सकिएको दावी पेश भएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आयोजना कार्यान्वयन सम्वन्धी सहजीकरण बैठकमा उक्त दावी पेश भएको हो । दुई वर्षमा आयोजनाको निर्माण कार्य सकिने गरि २०७३ साल जेठ १४ गते सम्झौता भएको थियो । तोकिएको समयमा काम नसकिए पछि पहिलो पटक ३५१ दिनमा सक्नेगरि समय थप गरिएको थियो ।
थप गरिएको उक्त समयमा पनि आयोजना सम्पन्न नभए पछि २४५ दिनको लागि अर्थात आउदो माघ १४ गतेसम्मलाई समय थपिएको थियो । दोस्रो पटक समय थपिएको निर्धारित समय सकिन मात्र तीन महिना मात्र बाँकी रहेको छ । बाँकी रहेको ३ महिनामा जसरी पनि काम सम्पन्न गर्न आयोजनालाई सम्वन्धितहरूले निर्देशन दिए । बेत्रावतीदेख भैसेसम्मको साढे दुई किलोमिटरमा र ढुङ्गेदेखि गंगटेसम्म पर्ने बजार क्षेत्रमा पाइपलाइन बिच्छाउन स्थानीयबाट अबरोध आइरहेको गुनासो आयोजना पक्षले गरे पछि नुवाकोट क्षेत्र नम्बर २ का सासंद नारायणप्रसाद खतिवडाले त्यसको समाधानको लागि वडा स्तरदखि संघसम्मको जनप्रतिनिधिले पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
आयोजना सम्पन्न गर्न पटकपटक समय थपिरहदा सरकारको समेत बदनामी हुने
भएकोले कहिकतै अवरोध सिर्जना भएमा जनप्रतिनिधि, प्रशासन, प्रहरीसँगै नागरिक समाजसँगै बसेर अवरोधको बाटो खोल्नु पर्ने प्रदेशसभा सदस्य हिरानाथ खतिवडाले बताए ।
बिदुर नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जु पण्डितले आयोजनाले काम गर्ने बाताबरण हुँदा समेत ठेहेदार कम्पनीलाई दोष लगाएर बसेको बताए । बिदुर नगरपालिकाका नागरिकहरूले आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नमा सहयोग गरेता पनी समय थप्ने बाहाना आयोजनाले खोजेको बताए । बिदुर नगरपालिका भित्र एसियालि बिकास बैङकको झण्डै १ अर्ब ऋण सहयोगमा आयोजना निर्माण भैरहेको छ ।
रसुवा कला यात्रा २०७६
बेत्रावती/विगत एक वर्षदेखि चित्रकलाका माध्यमबाट ऐतिहासिक, पुरातात्विक र धार्मिक क्षेत्रको प्रचारप्रसारका साथै कला पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पु¥याउँदै आएको उपत्यकाका कलाकारको समूहले यसपटक भने उपत्यका बाहिर ‘स्थलगत चित्रकला कार्यशाला’ आयोजना गरेको छ ।
फेसबुकबाट जोडिएर हरेक शनिबार उक्त कार्यशाला गर्दै आएका उनीहरूले यसपालि रसुवाको ऐतिहासिक तथा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रलाई केन्द्रविन्दु बनाएर ‘शनिबारीय स्थलगत चित्रकला कार्यशाला’ आयोजना गरेको हो ।
कार्यक्रम अन्र्तगत बिहिवार बेलुका कदलाकारहरू बेत्रावती आइपुगेका थिए । शुक्रवार बेत्रावतीमा र कालिकास्थानमा बसेर उनीहरूले चित्रकला कोलेरका छन् । आइतवार नुवाकोट दवरवार र नुवाकोटका केही स्थानहरूको अवलोकन भ्रमण सकेर उनीहरूको टोली उपत्याका फिर्ता भएको छ । आइतवार विदुर सिथ्त सुखद पाहुना घर।ले कलाकारहरूलाई नुवाकोटको चित्रकलामा उतार्नुपर्ने पक्ष र क्षेत्रहरूको जानकारी दिँदै विदाई कार्यक्रम गर्यो ।
यसपटक ‘रसुवा कला यात्रा’ नाम दिएर चित्रकला कार्यशाला आयोजना गरेको कार्यक्रमका संयोजक दिवेश प्रधानले बताए । कलायात्राका सहभागी कलाकारको टोली उपत्यकाबाट बिहिबार बेत्रावती आईपुगेका छन् । रसुवा र नुवाकोटको सङ्गमस्थल ऐतिहासिक एवं धार्मिक तीर्थस्थल उत्तरगयाधाम, बेत्रावतीबजारको स्थलगत भ्रमण पछि शुक्रबार बिहान बेत्रावतीको सांस्कृतिक पर्व ठूलो (हरिबोधिनी) एकादशी मेलामार शनिवार कालिकास्थानमा सकिएको हो ।
कलायात्रामा राकेशचन्द्र श्रेष्ठ, दीपेन्द्रमान बनेपाली, राधेश्याम कर्माचार्य, कान्छाकाजी भासीमा, विक्रम प्रजापति, प्रकाश मानन्धर, झलक केसी, सूर्यराम सुवाल, रुविन बाडेलगायत कलाकार सहभागी हुँदैछन् । स्थानीयस्तरमा कलाकार शशीकुमार डङ्गोल र डिल्लीराम घिमिरेले संयोजन गरेका छन् । यस विषयमा पत्रकार नारायण ढुङ्गानाले तयार पारेको थप सामाग्री :
कैँचीले मुठारे झैँ देखिने सर्लक्क परेको बेत्रावती पारी नुवाकोटको तुप्चे फाँट । ठाउँठाउँमा भित्रउने बेलाको पहेँलपुर धान । धान भित्र्र्याइसकेपछिका खेतका टम्म मिलेका सुख्खा गरा । माथिल्लो भेगमा मानवीय बस्ती । एक छेउमा नागबेली बनेर बग्दै गरेको त्रिशुली ।
हेर्दै सुन्दर लाग्ने यो दृष्यमा काठमाडौँबाट कलायात्रामा आएका कलाकार दिपेन्द्रमान बनेपाली लोभिए । क्यामरामा कैद भएका बेत्रावती (उत्तरगया)का सयौँ दृष्यमध्ये तुप्चे फाँटले उनको मन तान्यो । बेत्रावतीको भिमसेनथानबाट क्यामरामा कैद भएको नुवाकोटको तुप्चेलाई एक्रेलिकका माध्यमबाट उनले क्यानभास रङ्ग्याए ।
उत्तरगयास्थित त्रिशुली र फलाखु खोलाको सङ्गम किनारबाट चित्रकार राधेश्याम कर्माचार्यले पाखा, पखेरा र ढुङ्गासँग पौँठेजोरी खेल्दै नागबेली भएर छङ्छङ बग्दै गरेको त्रिशुलगङ्गालाई क्यान्भासमा उतार्न चुकेनन् । वैदिक पुराण श्रीमत्भागवत्को हिमावत्खण्डमा वर्णित गोसाइँकुण्डबाट बग्ने त्रिशुलगङ्गा बेत्रावतीमा झरेपछि बेत्रगङ्गा र रुद्रगङ्गामा मिसिने ठाउँ उत्तरगयाका रुपमा प्रख्यात छ । भारतको दक्षिणगया स्नान गर्न जाँदा उत्तरगया स्नान गरेको छ कि छैन भनेर सोध्ने चलन रहेकाले पनि यसको महत्व धेरै छ भन्न सकिन्छ ।
नेपाली पर्वमा विभिन्न जिल्लाबाट आएर ब्रतालुहरूले स्नान गर्ने ठाउँमा ‘रसुवा कला यात्रा’ लिएर यसपाली राजधानीबाट चित्रकारको टोली आइपुगेको हो । ऐतिहासिक, धार्मिक र पौराणिक महत्व बोकेको उत्तरगयालाई कलाकारको टोलीले शुक्रबार आ–आफ्नै कोणबाट तिखारे । कलाकार सूर्यराम सुवाल र पुण्यराम माताङले त्रिशुलगङ्गालाई नै आधार मानेर अली फरक दृष्यलाई क्यान्भासमा उने । उनीहरूको चित्रमा त्रिशुलीको छालमात्रै होइन काउले, भाल्चे र मानेगाउँ समेत कैद भयो ।
केही माथि थिए अर्का कलाकार दिवेश प्रधान । गोरसाइँकुण्डबाट रफ्तार लिएर झर्दै गरेको त्रिशुलीको बहावमा उनको मन अडियो र त्यसैलाई क्यान्भासमा ढाले । तल्लो भेगमा थिए कलाकारत्रय विक्रम प्रजापति, प्रकाश मानन्धर र रुविन बाडे । त्रिशुलीसँग मिसिन आउँदै गरेको फलाखु खोला, त्यसमाथि बनेको रसुवा र नुवाकोट जोड्ने पक्की पुल तथा यहाँ रहेका ठूलाठूला ढुङ्गासहितको प्राकृतिक दृष्य उनीहरूको क्यान्भासमा प¥यो । कलाकार प्रजापति भन्छन्–‘ऐतिहासिक र धार्मिक क्षेत्र बेत्रावतीमा आउँदा प्रकृतिलाई भित्रबाट अध्ययन गर्ने अवसर मिल्यो, यहाँको कला, संस्कृति र प्राकृतिक दृष्य उपत्यकाको भन्दा भिन्न रह्यो, प्रकृतिसँग रमाउने अवसर पाउँदा धेरै सिक्ने मौका पनि मिल्यो ।’ त्यति नै बेला नागबेली भएर कलकल बग्दै गरेको त्रिशुलीसँगै देखिने माथिल्लो पहाडी बस्ती उतार्न कूची चलाउँदै थिए कलाकार झलक केसी ।
माने गाउँलाई पृष्ठभूमिमा राखेर त्रिशुलीको बहावलाई कैद गरेका केसी त्रिशुलीसहितको माथिल्लो पहाडी बस्तीले मन छोएकाले घामको परवाह नगरी चित्र बनाएको अनुभव सुनाउछन् । अलीमाथि फलाखु खोलाका बीचमा रहेको ढुङ्गामा आड लिएर कलाकारद्वय राकेशचन्द्र श्रेष्ठ र स्थानीय कलाकार डिल्लीराम घिमिरेले क्यान्भासमा दृष्य बनाए । उनको क्यान्भासको पृष्टभूमिमा कालिकास्थान, लहरेपौवा र धैवुङ प्रष्ट देखिन्थ्यो ।
कलाकार कान्छाकाजी भासीमालाई भने दृष्य चित्रले मात्रै चित्त बुझेन । उनले हरिबोधिनी एकादशीमा देखिने बेत्रावतीको चहलपहललाई क्यान्भासमा ढाले । कञ्चन फलाखु खोला र त्रिशुलीको मिलन बिन्दु, त्यसमाथि बनेको झोलुङ्गे पुल र पुल तर्दै गरेका बटुवा अनि एकादशीमा नदी तारिएको फूलको तोरणले उनको क्यान्भासमा स्थान पायो । लक्ष्मीप्रसाद खतेजा र तथागत चित्रकारले यहाँको पुरानो भवनलाई क्यान्भासमा उतारे ।
ब्रमाण्डको रक्षाका लागि समुद्र मन्थनका बेला भगवान् शिवले कालकुट विष
(हलाहल) सेवन गरेका र कैलाशबाट गोसाइँकुण्ड प्रवेश गर्दा त्यो विषयले घाँटीमा औडाहा भएर पानी खोज्ने क्रममा आफूले टेकेको बेतको लौरी जमीनमा गाडेको र त्यहाँबाट गङ्गा उत्पन्न भएकाले यसलाई बेत्रगङ्गा भनिएको जनविश्वास छ । त्यसैबाट अपभ्रम्स भएर बेत्रावती नाम रहन गएकाले यसको पौराणिक र धार्मिक महत्व रहेको हो ।
नेपाल तिब्बतबीचको युद्ध रोक्न वि.सं १८४९ मा भएको ऐतिहासिक बेत्रावती सन्धिले यसको ऐतिहासिक महत्वको स्मरण गराउँछ । योगी नरहरीनाथले वि.सं २०४९ मा कोटीहोम गरेपछि भने बेत्रावतीको धार्मिक महत्व बढेको स्थानीय बताउँछन् । यतिका महत्व बोकेर पनि उचित प्रचारप्रसार हुन नसक्दा धार्मिक पर्यटकीय महत्व ओझेलमा परेकाले यहाँको परिचय विश्वमा पु¥याउन चित्रकला कार्यशाला गरिएको ‘रसुवा कला यात्रा’का स्थानीय संयोजक शशिकुमार डङ्गोल बताउछन् ।
उनले वर्षांदेखिको आफ्नो सपना पूरा भएको बताए । विगत एक वर्षदेखि हरेक शनिबार स्थलगत चित्रकला कार्यशाला आयोजना गर्दै आएको फेसबुकबाट जोडिएको कलाकारको एक समूहले नजिकिँदो नेपाल भ्रमण वर्षलाई केन्द्रित गरेर पछिल्लो समया सम्पदा क्षेत्रमा चित्रकला कार्यशाला गर्दै आएको छ । चित्रका माध्यमबाट पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने मुख्य उद्देश्यले अहिले धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक र सम्पदा क्षेत्रमा पुगेर चित्रकला कार्यशाला आयोजना गरी प्रदर्शनसमेत गरिँदै आएको कलाकार दिवेश प्रधान बताउछन् ।
उनले बेत्रावती र कालिकास्थानमा बनाइएको चित्रलाई राजधानी काठमाडौँमा प्रदर्शन गरिने बताए । बच्चाले लेख्न पढ्न नजान्ने बेलामा पनि चित्र कोर्न सक्छ । भावना व्यक्त गर्ने माध्यम हो चित्रकला । अभिलेखको महत्वपूर्ण माध्यम भएकाले पनि एउटा देशका लागि चित्रकला अति नै महत्वपूर्ण रहेको प्रधान बताउछन् । अझै धेरै अध्ययन चित्रकलाबाटै हुने गरेको उनले बताए ।
उक्त टोलीले यसअघि भोटेकोशी सभ्यता शीर्षकमा सिन्धुपाल्चोकमा चित्रकला कार्यशाला गरिसकेको छ । उक्त समूहले उपत्यकाका तीनै जिल्लामा शृङ््खलाबद्ध रुपमा कार्यशाला गर्दै आएको छ । त्यसैको निरन्तरता हो ‘रसुवा कला यात्रा’ । नियमित शनिबारीय स्थलगत चित्रकला कार्यशाला शृङ्खला अन्तर्गत रसुवाको कालिका गाउँपालिकामा पनि कार्यशाला आयोजना भएको रसुवाका कलाकार डिल्लीराम घिमिरेले बताए ।
उत्तरगया गापा अध्यक्ष उपेन्द्र लम्साल काठमाडौँबाट आएका कलाकारले बेत्रावतीको परिवेशलाई विश्वमा पु¥याउने प्रयास गरेकामा सराहना व्यक्त गरे । यस्ता कार्यक्रमले कलाकारमा निखारता आउने र स्थानको प्रचारप्रसारमा सहयोग पुग्ने विश्वास कलाकारको छ । तस्बिरहरु:शशीकुमार डंगोल/इमेज
दर्पण सहकारीको १० औं साधारण सभा
सहकारीको १० औं बार्षिक साधारण सभा
विदुर/दर्पण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड विदुरले दशौँ बार्षिक साधारण सभाको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरेको छ । शनिवार विदुरमा आयोजित साधारण सभामा संस्थाका अध्यक्ष राजकुमार तिमिल्सिना, कोषाध्यक्ष रामेश्वर अधिकारी र लेखा समिति सदस्य सन्तोषकुमार तामाङको प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।
विदुर नगरपालिका रोडमा स्थापना भएको संस्थाको शेयर पुँजी ५० लाख रहेको छ । १० औं बार्षिक साधारण सभाको अवसरमा संस्थाले आफ्ना शेयर सदस्यहरूलाई चाँदीको सिक्का प्रदान गरेको छ । सहकारीको १० औं स्थापना दिवस र बार्षिक साधारण सभा अंकित सिक्का शनिवार आयोजित कार्यक्रमका बीच वितरण गरिएको अध्यक्ष राजकुमार तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।
संस्थाले आफ्ना शेयर सदस्यहरूको हितका लागि सञ्चालित स्वास्थ्य उपचार कोषको रकम समेत प्रदान गरेको छ । २०७५ चैत्र २८ मा सवारी साधन दुर्घटनामा परी घाइते भएका शेयर सदस्य सन्तोषकुमार तामाङको उपचारका लागि संस्थाले १० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको हो ।
दर्पण सहकारीले आफ्नो स्थापना दिबसको अबसरमा शुक्रवार जिल्ला अस्पताल त्रिशुलीका बिरामीहरूलाई फलफुल समेत बितरण गरेको थियो ।
जिल्ला अस्पतालमा फलफुल वितरण गर्दै । तस्बिर : रोशन बोगटी/इमेज
यसै, बिच उत्प्रेरणा बहुउद्देश्यिय सहकारी संस्था विदुरले १२ औँ बार्षिक साधारण सभा शुक्रवार सम्पन्न गरेको छ । सहकारीको कार्य समिति पुनः श्रीकृष्ण आचार्यकै अध्यक्षमा गठन भएको छ ।
सिसडोलमा महानगरको बीमा कार्यक्रम
विदुर/काठमाडौँ महानगरपालिकाले नुवाकोटमा फोहोर फाल्दै आएको स्थान वरपरका नागरिकहरूलाई तत्कालै लाभ मिल्ने कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले सिसडोलका स्थानीय बासिन्दालाई स्वास्थ्य, कृषि र पशु बीमा गर्ने भएको हो ।
फोहोरका कारण स्थानीहरूमा अनेकौं समस्या परेको भन्दै बीमा गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ । काठमाण्डौ महानगरपालिकाले १४ वर्षदेखि सिसडोलमा फोहर व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।
बीमाका लागि अहिले प्रभावित नागरिकहरूको नामावली संकलनको काम भइरहेको बताईएको छ । नामावली संकलनको काम सकिएपछि बीमाको कार्य शुरु गर्ने महानगरपालिकाका वातावरण विभाग प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले कताए । सिसडोलमा काठमाडौँ उपत्यकाका १८ स्थानीय तहको फोहर फालिदै आएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाबाट दैनिक एक हजार मेट्रिक टन भन्दा पनि बढी फोहर बस्तुहरू निस्कने अनुमान गरिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाबाट दैनिक उत्सर्जन हुने फोहरमध्ये करीब ७५ प्रतिशत नुवाकोटको सिसडोलमा आइपुगिरहेको छ । अन्य फोहोर व्यवस्थापन उतै हुने गरेको छ ।
दुई वर्षका लागि भन्दै अहिले सम्म फोहर थुपार्दा स्थानीय निकै प्रभावित भएका थिए । दीर्घकालीन फोहर व्यवस्थापन गर्नका लागि सिसडोलभन्दा दुई किलोमिटर पर बञ्चरेडाँडामा फोहर विसर्जनस्थल निर्माणकार्य भइरहेको छ । शहरी विकास मन्त्रालयले बञ्चरेडाँडामा दीर्घकालीन फोहर सङ्कलन केन्द्र निर्माणको काम पनि तीव्ररूपमा अघि बढेको जनाएको छ । निर्माणका लागि मन्त्रालयले ३८ करोड बजेट छुट्याएको छ । उक्र रकमबाट निर्माण थालिएको नयाँ डम्पिङ्ग साइटको काम सुरु भएपनि ढिलो गतीमा भइरहेको छ ।
कृषकलाई प्रविधि वितरण
ककनी/कृषिमा आधुनिकिकरण ल्याउन तारकेश्वर गाउँपालिकाको कृषि समुहलाई हाते ट्याक्टर बितरण भएको छ ।
गाउँपालिका र कृषि ज्ञान केन्द्र नुवाकोटको आर्थिक सहयोगमा वडा नम्वर २ का कृषकहरूलाई हाते ट्याक्टर र पम्प उपलव्ध गराईएको हो । आधुनिक र प्रविधियुक्त खेतीमा लाग्न किसानहरूलाई कृषि औजार सामग्री वितरण गरिएको बताइएको छ । प्रविधिको प्रयोगले किसानहरू ब्यबसायीक हुने बिश्वास गाउँपालिकाको रहेको छ ।
दुईलाई बैंकको छात्रवृत्ति
विदुर/सानिमा बैंक किस्पाङ शाखाले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत दुई विद्यार्थीलाई छात्रबृत्ति प्रदान गरेको छ । बैंकले उपलब्ध गराएको छात्रबृत्ति गाउँपलिका अध्यक्ष छत्रबहादुर लामाले विद्यार्थीहरू सञ्जु तामाङ र रामशरण विश्वकर्मालाई प्रदान गरे । बैंकले हरेक वर्ष कक्षा ११ र १२ मा अध्ययन गर्ने जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रबृत्ति उपलब्ध गराउदै आएको छ । त्यस अन्र्तगत जनही साढे ३७ हजार प्रदान गरिएको बैंकका किस्पाङ प्रमुख प्रसन्न सेढाईले बताए ।
ऐतिहासिक पाटी निर्माण सुरु
बट्टार/विदुर नगरपालिका वडा नम्बर ४ बट्टारको पुरानो बजारमा रहेको ऐतिहासिक पाटीको पुननिर्माण सुरु गरेको छ । पुरातत्व विभागले यो पाटी निर्माण गराउन थालेको हो ।
करिब ३ सय वर्षअघि निर्माण भएको पाटी विभागले दुरुस्तै निर्माण गर्ने विदुर नगरपालिका वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष टलकमान श्रेष्ठले जनाए । मल्लकालमा निर्माण भएको सो पाटी निर्माणको लागि पुरातत्व विभागले ८० लाख रुपैयाँ बजेट तर्ज‘मा गरेकोमा त्यसमा निर्माण व्यवसायीले ५५ लाख रुपैयाँमा पहिलाको जस्तै संरचना तयार गर्ने बताइएको छ । २०७२ सालको महाभुकम्पले ध्वस्त भएको पाटी यसै आर्थिक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने बताइएको छ ।
जेष्ठ नागरिकको सम्मान
रानिपौवा\_ककनी गाउँपालिकाले ९० वर्ष भन्दा माथीका जेष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्ने अभियान सुरु गरेको छ ।
विसं २०७५ चैत्र मसान्तसम्म ९० वर्ष उमेर पार गरेका वडा नम्बर १, २ र ३ का १० जना जेष्ठ नागरिकलाई मंगलबार उनीहरूको घरमा नै पुगि सम्मान गरिएको उपाध्यक्ष सीता लामा खतिवडाले बताए । सम्मानित हुने जेष्ठ नागरिकलाई २ हजार रुपैयाँ सहित प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर लामाले जानकारी दिए । उनको अनुसार सम्मानित हुने व्यक्तिहरूलाई दोसल्ला ओढाएर न्यानो कपडापनि प्रदान गरिएको छ ।
दुई हजार बढी सवारी साधन कारबाही
विदुर/नेपालीहरूको महान पर्वहरू बडादशै देखि तिहारहुँदै छठसम्मको अबधिमा नुवाकोटमा दुई हजार भन्दा बढी सवारीसाधन कारबाहीमा परेका छन् भने दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु भएको छ ।
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यलय नुवाकोटको अनुसार दशैको फुलपातीदेखि अहिलेसम्मको अवधिमा दुई हजार सवारी साधन कारबाही गर्दै १६ लाख ९६ हजार रुपैया राजश्व संकलन भएको छ ।
पर्व लक्षित सचेतना कार्यक्रम अन्तर्गत गरिएको चेकजाँचका क्रममा क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेको, मादक पदार्थ सेवन गरेर गाडी चलाएको, चालक अनुमति पत्र नभई गाडी चलाएको लगायतका कुसरमा चालकहरू कारबाहीमा परेका छन् । जसमा ५२२ वटा ट्रक, ३७८ वटा जीप तथा कार, २०९ वटा मोटरसाईकल, १५३ वटा बस, ४५ वटा ट्रयाक्टर र यात्रुसंग बढी भाँडा असुल्ने ७ वटा बसलाई कारबाही गरेको ट्राफिक प्रहरी प्रमुख विकल भट्टराईले जानकारी दिए ।
हामी नागरिक स्तम्भको पहिलो सामाग्री
माछी जालैमा जेलिएको एउटा जिन्दगी
बेत्रावती\_नुवाकोट र रसुवा जिलको सिमास्थल बेत्रावतीका मानबहादुर गुरुङ तीन दशकदेखि माछा मार्ने जालसँगै खेल्दै आएका छन् । बेत्रावतीको पुलमाथी एउटा लिखुरे फलाममा लेखिएको छ– रसुवा जिल्लामा हार्दिक स्वागत छ तर कतै लेखिएको छैन पुलमुनी एउटा जालहारी जिन्दगी छ भनेर । रसुवा छिर्ने ठाउँमा बेत्रावतीमा तपाईलाई स्वागत छ भनेर लेखिएको छ, पारी नुवाकोट वारी रसुवा । त्यही जिल्लाको प्रवेशद्धारमा छ एउटा छाप्रो ।
‘जिन्दगीको के भर छ र’ भन्ने गीत जस्तै लाग्छ उनलाई आफ्नै जीन्दगी आजभोलि । फलाखु र त्रिशुली नदीका किनारमा आफ्नो जीवनधान्न माछा मार्ने बहानामा नदीको छालसंग पौठेजोरी खेलेका अनगिन्ती स्मृतीले उनी आफैलाई कल्पनाको संसारमा पु¥याउने गर्छ अचेल । खोलाका चिप्ला ढुङ्गाहरू पानी चिप्लीएसरी उनको सुकुम्बासी जिन्दगी बितेको तीन दशक पुगेछ थाहै नपाई । ‘हिजो जस्तो लाग्छ पुल मुनी बसेको, अनुहारमा एक झप्को मुस्कान ल्याएर मानबहादुर भन्छन्– तीन दशक आँखै अगाडी चिप्लीएर गईसकेछ ।’ उनलाई लाग्न थालेको छ मान्छेको जीन्दगी पनि जालजस्तै जेलिएको छ । जेलिएपछि कतैबाट पनि निस्कन र उम्कने बाटो नभएजस्तो लाग्छ उनलाई ।
मजदुरी र माछा गुरुङको जिन्दगीको पर्याय हुन् । यसैबाट चारजनाको परिवार पाल्ने मेसो जुटाइरहेका उनले दुई छोराछोरीको लालनपालन र शिक्षादीक्षा समेत थेगेका छन् ।
उनका दुई छोराछोरीमध्ये छोरा आशिषले केही बर्ष अघि मात्रै रसुवा जिल्लाको लहरेपौवास्थित नीलकण्ठ उच्च माविबाट प्रबेशिका परीक्षा उत्तिर्ण गरेका थिए । सुकुम्बासीको छोरो बिद्यालयकै प्रथम भए पछि उनको खुसीको सिमा रहने । जिन्दगीमा त्यती धेरै खुसी नभएका मानबहादुर छोराको सफलताले उनलाई निकै खुसी तुल्यायो । ‘म मेरो जिन्दगीमा त्यति धेरै खुसी कहिल्यै भएको थिइन’ मानबहादुरले भने ।
आर्थिक अबस्था कमजोर भएका गुरुङ छोरालाई कलेजमा भर्ना गर्न नसक्दाको क्षणमा दुखि भएका रहेछन् । छोराका भर्ना गराउन नपाउदाँ उनका चार रात अनिदो बिते । हाल छोराले छात्रबृतीमा पढ्न पाएकोमा उनी खुसी छन् । ‘बिजयकुमार नाउँको पत्रकार आएका थिए उनैलै म पढाउँछु भनेर लगे, गुरुङले भने– मेरो छोराले इञ्जिनिरिङ्ग पढ्दै छ ।’ राम्रा घर बनाउन नसकेका उनले छोरालाई इञ्जिनियर बनाएर एउटा राम्रो घर बनाउने धोको छ । सानो झुप्रोमा हिउदँमा मात्रै बस्ने गरेका उनले बर्षायाम लाग्ने बित्तीकै बजारमा कोठा खोज्न जाने गरेका छन् ।
उपमेयरलाई खुल्ला पत्र
आदरणीय उपप्रमुखज्यू, बेलकोटगढी नगरपालिका
युद्धमा आफ्नो बा गुमाएको तपाईं आफैंमा एक क्रान्तिकारी योद्धा र सुझबुझ भएको नेता हुनुहुन्छ । प्राज्ञिक रूपमा पनि तपाईंको योग्यता मननयोग्य छ । फेसबुकमा पेजमा यहाँले आफ्नो नगरपालिकाको खास कुनै क्षेत्रमा फोहर संकलन गरिरहेको तस्विर राखेपछि मलाई सकसक लाग्यो र मैले जानेबुझेसम्मका केही सुझाव दिन मन लाग्यो । कमसेकम तपाईंको नगरपालिकामा खासगरि वातावरणीय क्षेत्रमा अनुकरणीय कदम चालियोस् र त्यसका लागि गम्भीर पहल होस् भन्ने आह्वानका साथ म यो आग्रह गर्दैछु ।
१. प्लास्टिकजन्य फोहरका कारण संसारका खोलानाला प्रदुषित छन् । ठूला मैदान र शहर हुँदै बग्ने नदीहरू त प्रदुषित भईहाले, गाउँठाउँका खोल्छाखाल्छी प्राङ्गारिक (अर्गानिक) पाखामा पनि विशाक्त प्लास्टिक छरिएका छन् । त्यसले पानी, जलचर र वन्यजन्तुको प्राकृतिक जीवन वर्वाद भएको छ । र, अन्तत : त्यसले हरियापरिया र मलिला पाखा र कुवा तथा पानीका मूलहरूलाई प्रदुषित पार्नेछ । अहिले नै प्लास्टिकजन्य फोहोर व्यवस्थापनमा पहल नगर्ने हो भने भोलि त्यसले कस्तो अवस्था निम्तेला, कल्पना नि गर्न सकिन्न ।
२. नाफा कमाउने होडमा पुँजिवाद/उपभोक्तावाद/बजारबाद/साम्राज्यवादले असिमित र अनावश्यक सामानहरू समेत सिर्जना गरेको छ । मान्छेको जीवनलाई सहज बनाउने नाममा त्यसले स्याम्पु, साबन, चक्लेट, गुट्खा र रक्सीका समेत अत्यन्त साना प्याकेट बनाएको छ । र, एकचोटी प्रयोग गरेर सडक/खोलामा सिधै फालिन्छन् त्यस्ता फोहर । गाडीमा हिँड्दा आलुचिप्स/चाउचाउ/कुरमुरे/झुरझुरेका प्याकहरू सर्वसाधारणले प्रयोगपश्चात फ्याँकेको देख्नुभएकै होला । मोबाइलका चार्जर लगायत प्रविधिजन्य फोहर पनि सिधै माटो र पानीमा मिसिन आइपुगेको छ ।
३. यस्ता प्लास्टिकजन्य नकुहिने फोहरले पृथ्वीलाई बर्वाद बनाउँदैछ तर उपभोक्तावाद र दलाल नोकरशाही/पुँजीपतिहरूको चंगुलमा फसेका राज्य सञ्चालकहरू ‘सिंगल युज’ प्लास्टिक रोक्ने विषयमा निर्णय गर्न सकिरहेका छैनन् ।
४. यस्तोमा कमसेकम तपाईंको नगरपालिकाले जस्तोसुकै प्लास्टिकजन्य फोहर सङ्कलन गर्ने अभियान चलाउन सक्छ । ल्याइएको प्लास्टिकजन्य हलुका फोहोरको नगरपालिकाले प्रतिकिलोका हिसाबले पैसा दिन पनि सकिन्छ । च्यातिएका बोरा, प्रयोगमा नआउने सबै खालका प्लास्टिक, चाउचाउ, गुट्खाका खोल, टुटेफुटेका प्लास्टिकका भाँडा, ‘वन टाइम युज’ दारी काट्ने रेजर, फाटेका प्लास्टिकका नाम्ला, दाम्ला, चक्लेट÷बिस्कुटका मसिना/ठूला खोल, आदि सङ्कलन गर्न सकिन्छ । सङ्कलित प्लास्टिकहरू त रिसाइकल गर्ने कम्पनीलाई मासिक÷अर्धवार्षिक रूपमा बेच्न पनि सकिन्छ । फोहोर व्यवस्थापन बारे यस क्षेत्रका जानकारहरूसँग अझ बढी जानकारी होला ।
५. स्कुल पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयबाटै सूचना दिएर यो काम गराउँदा झनै प्रभावकारी पो होला कि ! स्कुलमा वातावरण समूह बनाएर तिनलाई वडा र टोलहरूमा परिचालित गर्दा पो होला कि! अनि वडा र टोलमा पनि प्राज्ञिक र समझदार व्यक्तिहरूको वातावरणीय समूह बनाउने कि ! स्कुले विद्यार्थी र त्यस्तो टोल समुहको समन्वयमा प्लास्टिक÷फोहर विरोधी अभियान सफल बन्छ कि! अझ प्रत्येक वर्ष कसको टोल वडा सफा भनेर घोषणा पो गर्ने कि ! वषैपिच्छे कक्षा परिवर्तन हुने हुनाले कक्षा ८/९ का विद्यार्थीलाई विद्यालयको वातावरीय समुहमा पदेन यस्तो भूमिका पो दिने कि ! जे जसरी होस्, फोहर नगरपालिकामा आइपुगोस् ।
६. प्लास्टिक होस् या जुनसुकै फोहर, त्यसलाई सडक, घारी, नदीमा फ्यात्त फाल्न सहज हुन्छ । तर त्यसको व्यवस्थापन असहज हुन्छ तर कमरेड कविता, तपाईंले नाफाखोर पुँजिवादी व्यवस्थाले जन्माएको यो घिनलाग्दो फोहरको व्यवस्थापनमा जमेर कदम चाल्नुभयो भने हाम्रो क्षेत्रले तपाईंले सधा स्मरण गर्नेछ । शहिदपुत्रीले धर्तिप्रति निर्वाह गरेको असल कर्तव्यलाई पितृप्रतिको श्राद्धको रूपमा असल मान्छेहरूले सम्झनेछन् । तपाईंलाई ख्याल गराउँ, सिक्किमको एउटा ठूलो गाउँक्षेत्रमा पूर्ण रूपमा प्लास्टिक प्रतिवन्ध छ । गाउँ छिर्ने गाडीहरूले लुकाएर प्लास्टिक लगेकि भनेर स्थानीयहरूले नै खोतल्छन् । उसो त सिक्किम आफैंमा ‘अर्गानिक’ राज्य हो ।
७. डोकोमा अघिअघि फोहर उठाउँदै जाने, पछिपछि फोहर फ्याँक्दै जाने यो हाम्रो संस्कार बनेको छ । गुट्खा, पानमसला र चुरोटका ठूटा र चाउचाउका खोल पसल र गाडी गुड्ने सडक किनार परपर छिचोली साध्य छैन । हत्तपत्त नदेखिने यस्तै फोहरले माटो, पानी, जलजीवन र वन्यजीवन वर्वाद हुँदैछ । यसर्थ, बेलाबेला सचेनात्मक फोहरमैला सङ्कलन कार्यक्रम चलाएपनि फोहरमैलाको जरोमै पुग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
८. स्थानीय रूपमा यस्ता फोहर सङ्कलनका काम छँदैछ, अर्काेतर्फ नगरपालिकाले प्लास्टिक उत्पादन गर्ने कम्पनी, स्याम्पु, उत्पादक/वितरक, खैनी उत्पादक/वितरक कहाँ ‘सिंगल युज’ सामान नबनाउनका लागि दवाब पनि दिन सकिन्छ । उद्योग वाणिज्य महासंघ मार्फत दवाव दिएर हुन्छ या मिडियामार्फत यसको ‘एड्भोकेसी’/काम गर्न सकिन्छ ।
९. स्थानीय स्तरमा अचेल आरसिसि भवन बन्न थालेका छन् र आरसिसि चर्पी । कतिपयले चर्पीको निकासलाई खोला/नदीतिर सोझ्याएका पनि छन् रे । त्यस विषयलाई पनि सम्बोधन हुनेगरी पहल गर्नुपाए हुने ।
१०. कविताजी, महिलाका लागि राजनीति फलाम चपाउनु जत्तिकै असहज छ । अझ विवाहितालाई त झनै सकस । महिलाको पारिवारिक र प्रजनन दायित्व, आफन्त, औपचारिकताले समाज वदल्ने महान महत्वाकांक्षामा तुषारापात भएका उदाहरण नेपालमा मात्र होइन, विश्वभर छन् । तर, जतिसुकै कठिन भएपनि कमसेकम तपाईंको (हाम्रो पनि) रसिलो–पोषिलो बेलकोटगढी नगरपालिकालाई अर्गानिक पालिका बनाउने प्रण गर्नुहोला भन्ने अपेक्षा गर्दछु । उपाय देखाउन, सुझाव दिन सहज छ तर काम गर्न गाह्रो छ । आशा छ, तपाईंले सम्भव भएसम्म आफ्नो नगरपालिकालाई प्लास्टिकमुक्त र प्रांगारिक बनाउन पहल गर्नुहुनेछ ।
नोट : एउटा झन्झावात/युद्धबाट गुज्रिएको परिवारको सदस्य भएकाले र त्यस्ता व्यक्तिहरूले परिवर्तन/रूपान्तरणका विषयलाई गम्भीरताका साथ लिन्छन् भन्ने आशयका साथ सुझाव पेश गरेको हुँ । वातावरणीय विषयमा बेलकोटगढीले आफूलाई प्रयोगात्मक/अनुकरणीय रूपमा पेश गर्न सके भोलि तपाईंको नगरपालिकाबाट देशभरका गाउँपालिका/ नगरपालिकाले फोहोर/प्रदुषण व्यवस्थापनबारे राम्रोसँग सिक्न सक्लान् भन्ने अपेक्षा छ । अभिवादन ।
प्रकाश आस्था, वातावरण संवेदनशील नागरिक
सामूहिक खेतीमा सांसदको बजेट
विदुर/पञ्चकन्या र लिखु गाउँपालिकामा सामूहिक खेती प्रर्बद्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको छ । सामुहिक खेती प्रर्बद्धन कार्यक्रमका लागी नुवाकोट क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधि सभा सदस्य हितबहादुर तामाङले संसद बिकास कोषको रकमबाट ५० लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेका छन् ।
पञ्चकन्याको चारवटा वडा र लिखु गाउँपालिकाको एउटा वडामा सञ्चालन गर्न लागिएको ‘सामूहिक खेती प्रर्बधक कार्यक्रम’ का लागि औपचारिक छलफल समेत भएको छ ।
लिखु गाउँपालिका वडा नं ३ मा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा लिखु–पञ्चकन्या सामूहिक खेती प्रबद्धक समितिको पदाधिकारी सहित लाभान्वित किसानसंगको छलफलमा सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र नमूनाको रुपमा चलाउन प्रतिबद्धता जनाए ।
भेलामा पञ्चकन्याका वडा न १,२,३,४ र लिखु गाँउपालिका ४ का वडा अध्यक्ष सहित सम्पूर्ण वडा सदस्यहरू, कृषि, पशु र सहकारीका कर्मचारीहरूको सहभागिता थियो ।
२०७६ कात्तिक २५ गतेको सम्पादकिय
रसुवागढी नाका सुधार गर
नेपालको रसुवागढी नाकालाई चीनको संघीय सरकारले दक्षिण एशिया नै प्रवेश गर्ने मूलद्वारको रुपमा हेर्न थालेको पाइएको छ । दक्षिण एसिया प्रस्थान गर्ने मुख्य मार्गको रुपमा बिकास गर्न चीन तर्फ अत्याधुनिक संरचना र सडक मार्ग चीनले बिस्तार गरिरहेको छ । रसुवागढी केरुङ नाकाभन्दा पारिपट्टि चिनियाँ भूभागमा आधुनिक भवन केही वर्ष अघि नै बनेको छ । त्यसो त, अध्यागमन र भन्सारका भवनहरूमा आधुनिक उपकरण जडान भएका छन् । नाकाबाट केरुङ बजारसम्म पुग्न दुई लेनको चिल्लो कालोपत्रे सडक निर्माण गरेको छ । केरुङसम्म पुग्ने सडकमा पहिरो छल्नका लागि ठाउँ ठाउँमा सुरुङ र आकाशे पुल हालिएको छ । सडक भित्ताबाट झर्ने ढुङ्गा रोक्नको लागि तारजाली लगाइएको छ । यि भौतिक संरचनाको विकासलाई मध्यनजर गरेर हेर्दा यस नाकालाई चीन सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर विकास गरिरहेको छ । त्यसैले आफ्नो भूभागतर्फ तीव्र रूपमा भौतिक विकास गरिरहेको छ ।
रसुवागढी नाकाबाट व्यापारिक कारोबार बढे पनि नेपालतर्फ सीमामा भौतिक पूर्वधारको अवस्था नाजुक छ । पानी पर्दा पहिरो र घाम लाग्दा धूलो उड्ने, हावा चल्दा माथिबाट ढुंगा खस्ने नाकामा प्रहरीले टहराबाट सुरक्षा जाँच गर्नु पर्ने बाध्यता नेपाल पट्टि रहेको छ । झण्डै झण्डै नाका खुलेको बेलाको जस्तो अवस्थामा अहिले पनि रहेको नेपाल तर्फको भौतिक संरचना विकास र सुस्त जाँगरका कारण एउटा विन्दुमा उभिएर दुई पट्टि हेर्दा नेपालको अवस्था दयनिय रहेको छ । त्यसो त बिकासको क्रम र चरणको स्मरण गर्दा पनि २०७२ साल बैशाख १२ गतेको केरुङ भूकम्प अघिसम्म सामान्य बजार मात्र थियो । अहिले निकै अग्ला–अग्ला आधुनिक घरहरू निर्माण भएका छन् । सरकारी कार्यालय समेत चीनले थपेको छ । सामान गोदाम गर्नको लागि ठूला–ठूला ड्राइर्पोट निर्माण भइरहेको छ । सडक सफा राख्नुको साथै जेब्रा क्रस ट्राफिक लाइट राखिएको छ ।
नेपालको रसुवागढी नाकाबाट केरुङसम्मको दुरी २४ किलोमिटर मात्रै छ । चीनले यसरी महत्व दिइरहेको नाका र मार्गलाई नेपाल सरकराले पनि उत्तिकै चासो राखेर भौतिक संरचनाहरू निर्माणमा तदारुकता देखाउनु पर्ने अवस्थाको सृजना भएको छ । जस्तापाताले बारेको सरकारी कार्यालय र माथिबाट खस्न ठिक परेको ढुङ्गासम्मको व्यवस्थापन गर्न तर्फ नेपाल सरकारले सोचेको छैन, वा जाँगर देखाएको छैन । दक्षिण एशियामै प्रवेशको पहिलो नाकाको रुपमा चीनले रसुवागढी नाकालाई तयार गरिरहेको अहिलेको अवस्थामा नेपालले पनि न्युनतम भौतिक पुर्वाधारणहरू खडा गरेर त्यसका लागि उपयुक्त वातावरण तयार गर्नु तत्कालको आवश्यकता बनेको छ ।
नुवाकोटको सिन्दुरे जात्रा
इमेजको अन्य सामाग्री यहाँ खोज्नुहोस्
यो ब्लग हेर्नेहरु
नेपाल सरकार, विज्ञापन बोर्डबाट जारी लोक कल्याणकारी सन्देश
– उद्योग, व्यवयास गरौं र आत्म निर्भर बनौं । – स्थानीय श्रोत साधनको उपयोग गरी उद्योग गरौं । – आयातलाई प्रतिस्थापन गरौं र निर्यातलाई बढाऔं । – उद्योगी र व्यवसायीको सम्मान गरौं । – पूँजी निर्माणमा सहयोग गरौं । – परनिर्भरता हटाऔं, आत्मनिर्भरता बढाऔं । – देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पु-याऔं ।
- - सांसदको जिम्मामा रकम दिनु गल्तीमाथि गल्ती - - संघीय सरकारले सांसद विकास कोषका नामले परिचित ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ खारेज गरिसकेको छ । तर, संघीय सरकारकै सिको गरेर प्रदेशहरूले विभिन्न नाममा सुरु गरेको यस्तै निरन्तरता दिइरहेका छन् । संविधानको मर्म र बजेटको सिद्धान्तविपरीत मानिएको यस कार्यक्रमलाई प्रदेशहरूले आगामी वर्ष समेत निरन्तरता दिने छन् । नागरिक, संविधानविद्, अर्थविद्, पूर्वप्रशासक तथा सरोकारवालाले सांसदको तजबिजीमा खर्च हुने ‘सांसद विकास कोष’जस्ता कार्यक्रम खारेज गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । चौतर्फी दबाब र सुझावअनुसार संघीय सरकारले सांसदहरूको तजबिजीमा खर्च हुने कार्यक्रम खारेज गरिसकेको सन्दर्भमा प्रदेशले पनि खारेज गर्न‘को विकल्प छैन । आफूखुसी खर्च गर्न सकिने यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन प्रदेशमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकमत देखिन्छन् । संघीय सरकारले स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रमका नाममा सांसदहरूमार्फत वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च गर्दै आएको थियो । कोभिड–१९ महामारी सुरु भएपछि भारतले सरकारले सांसदमार्फत खर्च हुने कार्यक्रम स्थगन ग¥यो । नेपालले पनि यस्तो कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने चौतर्फी दबाब भयो । त्यसपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को बजेट अध्यादेश सार्वजनिक गर्दै स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रम खारेज गरेको घोषणा गरे । त्यसपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई खारेज गर्ने अघिल्लो सरकारको नीतिलाई निरन्तरता दियो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गरेर ल्याएको बजेटमा पनि सांसदलाई बजेट दिइएन । अर्थमन्त्री शर्माले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष ०७९÷८० को बजेटमा पनि यस्तो कार्यक्रम छैन । विकास निर्माणमा जनतासँग जनप्रतिनिधि जोडिनुपर्छ नै । यो बजेट नभए पनि आफ्ना क्षेत्रका योजना र कार्यक्रमसँग सांसद त जोडिनैपर्छ । तर जोडिने कसरी भन्ने मूल प्रश्न हो । विगतमा लामो समयसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएको बेला सांसद नै जनताको सबै आकांक्षा र समस्यासँग जोडिनुपथ्र्यो र त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपथ्र्यो । जनप्रतिनिधिका प्रतिबद्धता र जनताका अपेक्षा सम्बोधन गर्ने क्रममा जनतासँग जोडिने एउटा उपाय सांसद विकास कोषलाई पनि लिइयो । केही हदसम्म अहिले पनि त्यही मनोविज्ञानले काम गरेको छ । तर अब मुलुक संघीयतामा गएको छ । गाँउ गाँउमा जनप्रतिनिधिहरू काम गरिरहेका छन् । प्रदेश सरकार छ । अब त्यही सांसद विकास कोष वा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई हेर्नुपर्छ । त्यसैले यो कार्यक्रमलाई अब निरन्तरता दिनु हुँदैन । बन्द गर्नुपर्छ । यो कार्यक्रम नेपालको संविधानको प्रतिकूल हुन्छ । नेपाल संघीय संरचनामा गइसकेपछि संविधानले तीन तहको सरकारलाई के काम गर्ने र नगर्ने भनेर स्पष्टसँग क्षेत्राधिकार तोकिदिएको छ । संघीय सरकारले गर्न‘पर्ने र गर्न नपाउने अधिकारको सूची पनि त्यहाँ लिपीबद्ध गरिएको छ । जनप्रतिनिधिहरू सांसद त्यो संविधान पालना गर्ने र कार्यन्वयन गर्ने भनेर शपथ खाएर गएका छन् । उनीहरूको प्राथमिक जिम्मेवारी संविधान कार्यन्वयन गर्नु हो, संगसंगै सरकारले संविधान उलंघन गरेर स्वेच्छाचारी बन्यो भने ट्याकमा ल्याउने पनि संसदले हो । जुन विषय संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन, त्यही विषय संघीय सांसदले गर्न पाउनुपर्छ भन्नु तर्कसंगत हुँदैन । स्थानीय वा प्रदेश सरकारले मात्रै गर्न पाउने भनेर जुन क्षेत्रहरू छुट्याइएका छन्, निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम पनि त्यही खर्च खर्च हुन्छ । रकम चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको नाममा आउँछ, तर व्यवहारिक रुपमा चाहिँ स्थानीय सरकारले मात्रै खर्च गर्न पाउने ठाउँमा खर्च हुन्छ । स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने योजना संघीय सांसदले क्षेत्रविकास कोषमार्फत सिधै गर्न पाउनुपर्छ भन्नु चोर बाटोबाट गरिएको संविधानको उल्लंघन हो । त्यसैले, संघीयता आउनुभन्दा अगाडि जेजस्तो गरिएको भएता पनि अहिले यस्तो गर्न पाइँदैन। २०७२ सालभन्दा अगाडि गरेको हो, त्यसैले अहिले गर्न पाउनुपर्छ भन्नु हुँदैन । त्यो बेला निर्वाचित स्थानीय तह थिएन, संघीयता थिएन।जनप्रतिनिधि भनेको सांसद मात्रै थिए तर अहिले वडादेखि नै निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन्, कार्यकारी अधिकार त्यही पुगेको छ, अब सांसदले कार्यकारी भुमिकाको अपेक्षा गर्नु हुँदैन । सांसदले निर्वाह गरेको विधायिकाको भूमिकालाई राम्रो वा नराम्रो भन्ने ढंगबाट सञ्चार माध्यमले पनि खासै मतलब गर्दैनन् । जसले गर्दा एउटा सांसद जहिले पनि त्यो दबाबमा परिरहन्छ। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा योजना वा बजेट नल्याएसम्म उक्त सांसदले विधायिकाको रुपमा गरेको कुनै पनि काम नदेख्ने अवस्था छ । केही न केही देखिने काम गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान छ । त्यसैले पनि योजना र बजेट लैजान वा यस्ता कार्यक्रम मार्फत आफ्नो उपस्थिति देखाउन खोज्दो रहेछ । त्यस्तै योजना छनौट र स्रोत वितरणको चलन नै त्रुटिपूर्ण छ । हाम्रो योजना निर्माण पहुँचमूखी छ, पहुँचवाला नेता, मन्त्री, निर्णय गर्ने ठाँउमा बसेका कर्मचारीले चाहेको ठाउँमा दर्जनौं योजना पार्न सक्छन् । बलिया नेताहरूले जति पनि पार्न सक्छन् । यसरी त सरकारमा बस्नेहरूको झन् हालिमुहाली हुने भयो । स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले जनताको दैनन्दीसँग सम्बन्धित समस्या नजिकबाट हेर्छन् र समाधानको प्रयास गर्छन् । समस्याहरू अब सिधै स्थानीय सरकारसँग ठोकिन्छन् । संविधानले सांसदलाई निश्चित सीमा तोकेको छ । संघीय वा प्रदेश सांसदको काम स्थानीय व्यवस्थापनको होइन, विधायिकी हो । स्थानीय सरकारको क्षमता वृद्धिका लागि संसदले भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ तर स्थानीय सरकारको काम नै आफैं गर्ने होइन । त्यसैले अहिले जे भइरहेको छ, त्यो गलत छ । त्यसको कारण यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु भनेको गलत कुरालाई निरन्तरता दिनु हो । समस्यालाई दिर्घकालीन बनाउनु हो । बरु ध्यान दिनुपर्ने केही फरक कुराहरू छन् । योजना छनौट गर्ने, बजेट विनियोजन गर्ने, न्यायोचित वितरण गर्ने, संसदमा भएको छलफललाई सरकारले सुन्ने, विधायिकाले संसदमा प्रभाव पार्ने कुरालाई सच्याउनेतिर लाग्नुपर्छ । संसदले सरकारलाई कसरी जवाफदेही बनाउन सक्छ । यतातिर नलागी सांसदको जिम्मामा रकम दिनु भनेको गल्तीमाथि गल्ती गर्नु हो ।
यो हप्ता धेरैले हेरेको १० सामाग्रीहरु
२०७९ साल असार १३ गते । वर्ष : १५, अंक : ३७
‘आफ्नै पारामा’ दीपक कायस्थ
विदुर । नव निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले वियज उत्सव र भोजभत्तेरबाट अहिलेसम्म छुटकारा पाएका छैनन् । निर्वाचित हुनका लागि नागरिकहरू बीच उम्मेदवार...
म्यादी प्रहरी नेताको टाउको दुखाई
२०७३ मा म्यादी प्रहरीमा छनोट भएका नुवाकोटका युवाहरू । फाइल तस्बिर विदुर । यस अघि आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउन दवाद दिएर फोन गर्ने राजनीत...
केशव पाण्डेको तीन करोड गुम्दै
विदुर । बागमती प्रदेश सांसद केशव पाण्डेले नुवाकोटको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा हालेको प्रदेश पुर्वाधार साझेदार कार्यक्रम अन्र्तगतको तीन करोड...
२०७९ साल असार ६ गते । वर्ष : १५, अंक : ३६
पुर्व जिविस सभापति पाण्डेको शालिक अनावरण
खरानीटार । जिल्ला विकास समिति (जिविस) नुवाकोटका पुर्व सभापति स्वर्गिय गोबिन्दप्रसाद पाण्डेको स्मृतिमा निर्माण भएको भवन तथा उनको शालिक नेपाली...
श्रष्टा सम्मान र कृति लोकार्पण
विदुर । साहित्यकार रुपा थापाको ‘सिङ्गो जूनको प्रतिक्षा’ साहित्यकार रामहरी रिमाल ‘बाजे’को ‘माउसुलीको पुच्छर’ लगायतका साहित्यक कृतिहरू विदुरमा...
‘जसको लागि बनेको हो उसलाई अविछिन्न सेवा दिनु’
शिवपुरी । पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले शनिवार शिवपुरी गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवनको उद्घाटन गरेका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि...
रसुवाका पदमार्गमा पर्यटक छिटफुट
विदुर । कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण सुनसान रहेको लाङटाङ र गोसाइँकुण्ड पदमार्गमा छिटफुट विदेशी पर्यटक देखिएका छन् । कोरोना भाइरस सं...
हराएको सहकारी खोज्दै वडा अध्यक्ष
नुवाकोटको विदुर नगरपालिका वडा नं. ४ मा हुनु पर्ने शुक्रपथ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड (काठमाडौं) वडा नं. २ मा फेला परेको छ । तस्बिर ...
नुवाकोटको सञ्चार माध्यामहरु, सम्पर्क व्यक्ति र मोवाइल नं.
# १ टिभी त्रिशुली कपिलदेव खनाल नं. ९८५१०९३२९० # २ रेडियो त्रिशुली ८८.४ मेगाहर्ज कपिलदेव खनाल ९८५१०९३२९० # ३ रेडियो जालपा १०४.५ मेगाहर्ज जगदीश खनाल ९८५१०८०१२२ # ४ नुवाकोट एफएम १०६.८ मेगाहर्ज श्रीराम अधिकारी ९८५१०८९५३३ # ५ रेडियो सञ्जिवनी ८९ मेगाहर्ज गमला लामा ९८६००४५३१४ # ६ रेडियो चिम्टेश्वर ९०.९ मेगाहर्ज राकेश डङ्गोल ९८६१५४१७२३ # ७ मिक्स एफएम ८९.४ मेगाहर्ज रुपा अर्याल ९८६००४७०७४ # ८ गज्जवको रेडियो १०५.७ मेगाहर्ज पुरुषोत्तम बस्नेत ९८५१०९७५५१ # ९ त्रिशुली खबर साप्ताहिक नवदीप श्रेष्ठ ९८५१११०६४५ # १० ईमेज साप्ताहिक शर्मिला उप्रेती ९८४१०८७००० # ११ नुवाकोट पुकार साप्ताहिक सुकदेव दाहाल ९८४१९६७३४८ # १२ सुन्दरादेवी सन्देश साप्ताहिक किरण प्र. अधिकारी ९८४३३२११५४ # १३ त्रिशुली प्रबाह साप्ताहिक शरण उत्सुक ९८५१००२९३८ # १४ रुपायन त्रैमासिक नवदीप श्रेष्ठ ९८५१११०६४५ # १५ महामण्डल त्रैमासिक श्रीराम श्रेष्ठ ९८५१०३२५४८ # १६ डवली खबर डट कम सुनिल श्रेष्ठ ९८४१३३५४६२ # १७ नुवाकोट जागरण साप्ताहिक शिव देवकोटा ९८५१२३४९८० # १८ उत्तरगया दैनिक शिव देवकोटा ९८५१२३४९८० # १९ रेडियो भैरबी ८८ मेगाहर्ज देवचन्द्र भट्ट ९८५१०६७३१५ # २० रेडियो तादी १०५.३ मेगाहर्ज सुजित भण्डारी ९८५१०२७९१५ # २१ नुवाकोट अनलाईन डट कम केदार ढकाल ९८५११२८९१५ # २२ खबर पेज डट कम कपलिदेव खनाल ९८५१०९३२९० # २३ नुवाकोट सन्देश साप्ताहिक श्रीराम नेपाल ९८५११८०६९६
नुवाकोटको दैनिक पत्रिका र म
नुवाकोट जिल्लाबाट प्रकाशन हुने दैनिक पत्रिकामा अहिले एउटा मात्रै छ ः उत्तरगया दैनिक । यो बीचमा यहाँबाट चार वटा दैनिक पत्रिका प्रकाशन भईवरी बन्द भएका छन् । अहिले ठिक एक वर्षको चक्र तय गरेको उत्तरगया दैनिकको ईतिहास पनि पुरानै छ । नुवाकोटलाई कार्यक्षेत्र बनाएर प्रकाशन हुने दैनिक पत्रिका मध्येको कान्छो उत्तरगया पनि एक समय प्रकाशन आरम्भ भएर स्थगन भएको सञ्चार संस्था हो । २०६३ सालदेखि नुवाकोटमा दैनिक पत्रिका प्रकाशनको इतिहास भेटिन्छ । यो समयखण्डमा प्रकाशन भएका सबै दैनिक पत्रिका कुनै न कुनै भुमिकामा सम्लग्न मात्रै नभई जिल्लामा दैनिक पत्रिका सुरु गराउने ‘लहडी तीन जना’ मध्येको एक भएकै कारण म (अन्य दुई जना ध्रुवकुमार रावल र भोलाराज पौडेल) दैनिक पत्रिका प्रकाशनको सवालमा केही कुरालाई सामान्य रुपमा लिन्छु र केही कुरालाई जिब्रो टोकेर ‘आम्मा हो’ भन्ने कित्तामा राख्छु ।
दैनिक पत्रिका प्रकाशन, समाग्री संकलन, बजार व्यवस्थापन र निरन्तरताको सवालमा केही पाटो भोगँे, केही पाटो बाहिर बसेर अनुभुत गरेँ । अहिले प्रकाशन भइरहेको उत्तरगया दैनिकले जुन गति लिएको छ, यो सबै हेरेर बाहिरबाट अनुमान लगाइने र भित्रि परिस्थिति विल्कुलै फरक छन् । ‘वान म्यान आर्मी’ भनेजस्तो शिव देवकोटा एक्लै पत्रिकाको सारा काम गर्छन् । बाहिर बजारमा वा पाठकका हातहातमा पुग्ने पत्रिका उनी अफिसमा लुसुलुसु पट्याइरहेका छन् । पत्रिका मेसिनमा राखेर गरिने छपाई बाहेकका सबै पक्ष, विषय र कामलाई एकै जनाले सन्तुलन कायम गरेर दैनिक पत्रिका प्रकाशन गर्नु र यो पनि वर्ष दिनसम्म खुरुुखुरु गरिरहनुले म अहिले जिब्रो टोकिरहेछु । यही परिस्थितिलाई नजिकैबाट हेरिरहेको (हेरिमात्रै रहेको) मेरो अनुभवमा नुवाकोटको दैनिक पत्रिकाको इतिहास अगाडी बढेर पनि पछाडी हटेको वा छलफल, लगानीका लागि एउटा क्षेत्र बनिसक्दा पनि बिर्सिइएकै अझोलमा परेकै हो ।
२०६३ साल बैशाख १० गते । नुवाकोटको पत्रिकारिताका लागि एउटा शुभदिन । जुन दिनले देखायो नुवाकोटमा दैनिक पत्रिकाको सम्भावना । तत्कालिन समयमा राजतन्त्र हटाउनका लागि सडक आन्दोलन उत्कर्षमा थियो । लगभग सबै क्षेत्र र अवस्था डामाडोलजस्तै थियो । काठमाडौंबाट प्रकाशन हुने पत्रपत्रिकाहरु विदुरमा आइपुग्न छाडिसकेको थियो । आमहड्तालका कारण । अहिलेको जस्तो इन्टरनेट, अनलाईन, सामाजिक सञ्जाल त्यसबेला प्रयोगमै थिएनन् । एक त बाहिरी जिल्लाको आन्दोलनको अवस्था यता थाहा पाउन मुस्किल, अर्को नुवाकोटको आन्दोलनले प्रचार नपाउने दोहोरो समस्या २०६३ को बैशाख पहिलो हप्तादेखिनै सृजना भयो । लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सूचनाको तिर्खाले नागरिकहरु, लोकतन्त्रवादीहरु प्याक्प्याक्ती हुँदा सम्मपनि विकल्प केही थिएन । अहिले पुर्व जिविस भवन अगाडी विदुर स्थित जिल्ला सहकारी संघको भवन बनेकै ठाउँमा नेपाल पत्रकार महासंघको अफिस थियो । त्यहाँ जिनतिन इन्टरनेट चल्थ्यो । जिनतिन यस अर्थमाकि त्यसबेलामा नेपाल टेलिकमको ल्याण्डलाईन फोन कम्प्युटरमा जोडेर इन्टरनेट चलाउनु पर्यो । इन्टरनेटको पासवर्ड हरेक मिनेटका हिसावले गणना हुनेगरी किन्नुपथ्र्यो । इन्टरनेटको पासवर्ड प्रदायकहरु काठमाडौंमा मात्रै हुन्थ्ये, यता जिल्लातिर चाहेर पनि किन्न सकिदैन थियो । त्यसो त दुई तीन वटा सरकारी कार्यालयले मात्रै ईन्टरनेट चलाउथ्यो त्यो पनि कहिलेकाहिँ । यस्तो चरम परिस्थितिमा हामीलाई सहयोग मिल्थ्यो तत्कालिन जिल्ला विकास समितिका कार्यक्रम अधिकृत पुष्कर शर्मा रिमालबाट । उनले जिविसको ईन्टरनेट पासवर्ड हामीलाई दिन्थ्यें । एक त कम स्पीडको इन्टरनेट थियो, अर्को परिरहने समस्या चाँही अर्को कम्प्युटरमा त्यही पासवर्ड राखेर अरु कसैले डायल गरे भने हाम्रा कम्प्युटरमा भएको इन्टरनेटको कनेक्सन टुट्थ्यो । त्यस्तो ‘हाला’ हुने अवस्थामा काठमाडौंका इन्टरनेट पहुँच भएका अग्रज पत्रकारहरुलाई फोन गरेर समाचार इमेल गर्न लगाएर जम्मा गर्ने र पत्रकार महासंघको अफिसमा देशैं भरी भइरहेको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अवस्थाको बारेमा बुझ्न आउने नागरिकहरुलाई खबर भनिरहनु असाध्यै झण्झट थियो । यो सबै समस्याको बेलिविस्तार काठमाडौंमा रहेका गतिशील समय मासिकका सम्पादक पुरुषोत्तम लम्साललाई लगाएपछि उताबाट निर्देशन आयो ‘गतिशीलको लोकतान्त्रिक आन्दोलन बुलेटिन भनेर ठोक् ।’
२०६२ साल फागुनबाट विकास पत्रकारिताका केन्द्रित रहेर नुवाकोट जिल्लाबाट प्रकाशन आरम्भ भएको मासिक पत्रिका थियो गतिशील समय । ध्रुवकुमार रावल प्रकाशक र पुरुषोत्तम लम्साल सम्पादक रहेको त्यो मासिक पत्रिकाको प्रमुख संवाददाताको भुमिकामा म थिए । अब सुरु भयो नुवाकोट जिल्लाको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको वेलिविस्तार दैनिक रुपमा पत्रिकामा छापेर वितरण गर्ने । काठमाडौंमा भइरहेको आन्दोलन, बाहिर जिल्लाका मुख्य समाचार र नुवाकोटको गतिविधिलाई समेटेर दैनिक रुपमै बुलेटिन प्रकाशनको निष्कर्षमा हामी पुग्यौं । पत्रकार महासंघ नुवाकोटको कार्यालयमा कम्प्युटर थियो । पत्रिकाको डिजाईन गर्न जानेका नुवाकोटका दुई जना मध्ये भोलाराज पौडेल त्यसबेला अल्लि फुर्सदिला थिए । भोलाराज, पत्रिकाका प्रकाशक ध्रुवकुमार र मैले दैनिक पत्रिकाको आकारमा (ट्यावलेट साइजमा चार पेज) २०६३ साल बैशाख १० गते ‘गतिशील समय लोकतान्त्रिक आन्दोलन बुलेटिन–१’ प्रकाशनमा ल्यायौं । ५०० को संख्यामा प्रकाशन भएको त्यो पत्रिका बिहान १० बज्नुभन्दा पहिल्यै निख्रियो । अब दिउँसो गाउँगाउँबाट र परपरबाट आउने आन्दोलनकारीहरुलाई त दिनैसकेनौं । त्यसको सिकाईले बैशाख ११ गतेको पत्रिकाको संख्या वृद्धि गरेर २ हजार बनाउने निर्णय भयो र पत्रिका छाप्ने प्रेससंग त्यही विषयमा सल्लाह गरेर भोलीको तयारीमा जुट्यौं । हठात्, पत्रिकाको डिजाईनको काम सकिएर प्रेसमा पुग्दा दोश्रो अंक पत्रिका छाप्न प्रेसले मानेन । कारण अहिले विर्सिएँ, त्यसबेला तत्कालिन शाही नेपाली सेनाले पत्रिका नछाप्न प्रेसका सञ्चाकलाई धम्क्याएको हुनुपर्छ । वा त्यस्तै केही भएको थियो । यसरी पहिलो अंकमै ‘लोकतान्त्रिक आन्दोलन बुलेटिन–१’ले विश्राम लियो । हामी तीनै जना बेलुकी छिन्नभिन्न भयौं ।
बैशाख ११ गते विहान सडकमा हामी निस्कने वित्तिकै स्थानीय नागरिक तथा आन्दोलनकारीहरुको हामीसित पत्रिकाको अपेक्षा थियो, त्यो स्वाभाविक पनि थियो । तर प्रेसले नछापिदिएपछि हामीसित विकल्प थिएन । हामीले समस्याको बेलिविस्तार लगायौं । भिडबाट एउटा आवाज आयो ‘तपाईहरुको पत्रिका डिजाईनको एक कपी प्रिन्ट गरेर ल्याउनुस् म फोटोकपी गरेर बाढ्छु ।’ विदुर नगरपालिका वडा नं. ४ का वर्तमान वडा सदस्य विदुरका बशन्त रिजाल थिए उनी । हामीले उनले भनेजस्तै गर्यौ । चार पेजको पत्रिका ‘ए–फोर’ साईजमा एक कपी प्रिन्ट गरेर उपलब्ध गरायौं । उनले त्यो पत्रिकाको फोटोकपी यत्ति वितरण गरेकी त्यो दिन हामी आफै अवाक भएका थियौं । दुई रुपैयाँ मुल्य राखिएको त्यो पत्रिका विक्रि वितरण त्यत्तिबेला सकियो त्यो दिन, जत्तिखेर उनको पसलमा रहेको फोटोकपी मेसिनको मसी सकियो ।
लोकतान्त्रिक आन्दोलन बुलेटिन प्रकाशनले दुई अंकपछि भने निरन्तरता पाएन । पत्रिकाको माग सधैं त्यही प्रकृतिले नभएपनि नुवाकोटमा एउटा दैनिक पत्रिकाको आवश्यकता छ भन्ने सन्देश ग्रहण गरियो, त्यस घटनाबाट ।
२०६३ साल माघको दोश्रो साता विदुरमा पहिलो नुवाकोट महोत्सव सञ्चालन भइरहेको थियो । त्यो र त्यसपछिको अर्को एउटा महोत्सव अहिलेको जस्तो खल्लो थिएन । पहिलो महोत्सव भएकै कारण पनि हुनुपर्छ, आम नागरिकहरुले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट केही न केही योगदान दिएकै थिए । त्यही क्रममा हामीले पनि पत्रकारिताको क्षेत्रबाट महोत्सवलाई खास बनाउन दैनिक पत्रिका प्रकाशनको सुरुवात गर्यौ । गतिशील समय मासिक २०६३ साल माघ १५ गतेबाट दैनिक रुपमा प्रकाशन आरम्भ भयो । प्रकाशक÷कार्यकारी सम्पादकमा ध्रुवकुमार रावल, प्रमुख सम्वाददातामा म र सम्वाददाता अनि पत्रिकाको कम्प्युटर डिजाइनमा भोलाराज पौडेल । पदका रुपमा प्रमुख सम्वाददाता भएपनि पत्रिकाको सम्पादनको जिम्मेवारी मेरो थियो । म पत्रिकारिता सिक्दै गरेको बखत थियो त्यो, मसित पत्रिका सम्पादनको ज्ञान र योग्यता थिएन । तीन महिना त्यो पत्रिकामा काम गरेर म बाहिरिए, त्यसपछिको अर्को तीन महिना ध्रुवकुमार रावल र भोलाराज पौडेलले दैनिक पत्रिका हाँके ।
पहिलो दैनिक पत्रिका गतिशील समयले नुवाकोट जिल्लामा सम्भावना देखाएर आफ्नो यात्रा टुङ्ग्याइसकेको थियो । अब दैनिक पत्रिका चल्छ है भनेर पत्रकार र जिल्लाका सञ्चारउद्यमीबीच बहसको विषय बनिरहेकै समयमा त्यसबेला रुपरेखा साप्ताहिक प्रकाशनको समुहबाट मलाई प्रस्ताव अयो अर्को दैनिक पत्रिका सञ्चालनको । नुवाकोट पत्रकार महासंघका तत्कालिन सभापति विश्वामित्र खनाल प्रकाशक रहेर त्रिशुली समाचार दैनिक दर्ता भयो । त्यसको सम्पादकमा राजुमित्र खनाल रहे, विश्वामित्र खनाल काठमाडौं बस्थ्ये । समाचार सम्पादकको जिम्मेवारी सहित फेरि सुरु भयो मेरो र नुवाकोटको दोश्रो दैनिक पत्रिका त्रिशुली समाचारको यात्रा । त्रिशुली समाचारमा ११ महिना काम गरेपछि म फेरि त्यहाँबाट पनि बाहिरिए । केही महिना राजुमित्र खनाल एक्लैले सञ्चालन गरेको त्रिशुली समाचार दैनिकमा तत्कालिन प्रेस चौतारी नुवाकोटका अध्यक्ष देवचन्द्र भट्ट जोडिए । त्यो पत्रिकाले झण्डै चार वर्ष आफ्नो प्रकाशनलाई निरन्तरता दिएर विश्राम लियो ।
त्रिशुली समाचार दैनिक प्रकाशन भइरहदा पनि अनियमित भएपछि हप्ताको सबै दिन प्रकाशन हुने दैनिक पत्रिकाको खोजी पाठक वर्गबाटनै हुन थालिसकेको थियो । त्यही आवश्यकतालाई मध्ये नजर गर्दै त्यस बेलाको खरो पत्रिका नुवाकोट आवाज साप्ताहिकको प्रकाशन समुह दैनिक पत्रिकामा होमियो । गतिशील समाचार नामको पत्रिका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा २०६६ साल साउनमा दर्ता भयो । तत्कालिन प्रेस सेन्टर नुवाकोटका संयोजक बद्री प्याकुरेल प्रकाशक तथा सम्पादक रहेको गतिशील समाचार दैनिकमा म असोजको पहिलो साता सह–सम्पादकको रुपमा जोडिएँ र पत्रिका प्रकाशन आरम्भ भयो । पत्रिकाको प्रवन्ध निर्देशकमा त्यही पत्रिका मुद्रण हुने छापाखाना भैरवी प्रेसका सञ्चालक मुकुन्द ढुङ्गाना थिए । हप्ताको छ दिन मात्रै प्रकाशन हुने (शनिवार बाहेक) त्यो पत्रिकाले ६ महिनापछि विश्राम लियो । एउटा समाचारमा पिडित र पिडकको नाम उल्लोपाल्टो परेकै कारण पत्रिकाको कार्यालय, कम्प्युटरहरु र अन्य सञ्चार सामाग्री तोडफोड भएपछि प्रकाशकले क्षतिपुर्तीको लागि धेरै प्रयास गरे, प्रहरी कार्यालयमा भएको क्षतिपुर्तीको लिखित प्रतिवद्धता तोडफोड गर्ने व्यक्तिहरुले लामो समयसम्म पुरा गरेनन्, पत्रिकामा थप लगानी गर्न नसक्ने भएपछि प्रकाशक बद्री प्याकुरेलले दैनिक पत्रिका बन्द गरे । अन्तत पत्रिकाको कार्यालय तोडफोड गर्नेहरुले क्षतिपुर्ती नदिएरै उन्मुक्ति पाए ।
यसरी फरक–फरक समयखण्डमा तीन वटा दैनिक पत्रिका सञ्चालनमा रहेको नुवाकोट २०६९ सालमा आइपुग्दा दैनिक पत्रिका विहिन बनिसकेको थियो । भर्खरै टिभि त्रिशुली सञ्चालनमा आएको थियो । चार वटा एफएम रेडियोहरु (नुवाकोट एफएम, रेडियो जालपा, रेडियो अभियान र रेडियो त्रिशुली) सञ्चालनमा थिए । साप्ताहिक पत्रिका हप्ताको सबै दिन आउने गरी सात वटै रहेपनि दुई वटा बाहेकका साप्ताहिक पत्रिकाहरु नियमित प्रकाशनमा थिएनन् । अन्य पत्रिकाहरु कहिकाही मात्रै बजारमा देखिन्थ्ये । नुवाकोटको समाचार र घटनाक्रम पढ्नका लागि फेरि साप्ताहिक पत्रिकानै पर्खनु पर्ने बाध्यता आम पाठक माझ तेर्सिसकेको थियो । यही समस्याको बीच तत्कालिन प्रेस युनियनका केन्द्रिय सदस्य शिव देवकोटाले प्रेस युनियनका तत्कालिन जिल्ला अध्यक्ष श्रीराम नेपाल र मसित दैनिक पत्रिका प्रकाशनको प्रस्ताव ल्याए । दैनिक रुपमा पत्रिका भरिने गरी आवश्यक स्थानीय समाचार र आर्थिक श्रोत व्यवस्थापन गर्न सके दैनिक पत्रिकाको सम्भावना र भविष्य फेरि राम्रो देखेर हामी तीन जना होमियौं उत्तरगया दैनिक प्रकाशनमा । शिव देवकोटा प्रकाशक, श्रीराम नेपाल सम्पादक रहेको उत्तरगया दैनिकमा मेरो भुमिका भने फेरियो । श्रमजीवी पत्रकारबाट म व्यवस्थापक बने । प्रवन्ध निर्देशकको रुपमा मैले उत्तरगया दैनिकमा काम थालें । सुरुका लगानी दामासाहीले तीनै जनाले हाल्यौं । स्थानीय समाचारको श्रोत म आफु संलग्न रहेको रेडियो त्रिशुलीलाई बनायौं । निक्कै जोश र फुर्तीफार्तीका साथ सुरु गरेको त्यो उत्तरगया दैनिकको यात्रा छ महिना लामो पनि बनाउन सकेनौं । आर्थिक अभावका कारण पत्रिका बन्द गर्यौं । हामी तीनै जना फेरि अलगअलग भएर आ–आफ्नै काम गर्न थाल्यौं । शिव देवकोटा नुवाकोट जागरण साप्ताहिक, श्रीराम नेपाल बट्टारमा नयाँ एफएम रेडियो सञ्चालनको तयारी र म रेडियो त्रिशुली सञ्चालन तिरै लागे ।
२०७५ साल असारको अन्त्यतिर शिव देवकोटाले फेरि दैनिक पत्रिका प्रकाशनको अवधारण सुनाए । पटक–पटक दैनिक पत्रिका प्रकाशन र यसको हैरानीबाट भुक्तभोगी भैसकेको म यसपाली सजिलै पन्छिए । केही लगानी समेत गुमाइसकेको, प्रकाशनहरुलाई निरन्तरता दिन नसकेको, कहिले कुन दैनिक त कहिले कुन दैनिकको ‘प्रिन्ट लाइन’मा नाम देखिने, आर्थिक प्रतिफल शुन्य जस्ता आफ्नै समस्याबाट म हैरान थिए । र मैले उत्तरगया दैनिकको पुर्नयात्रामा नजोडिने निर्णय गरे । शिव देवकोटा एक्लै उत्तरगया पत्रिका दैनिक रुपमा लिएर बजार ओर्लिएको आज एक वर्ष पनि बढी भइसकेको रहेछ । हिजो म आफु नै सक्रिय रुपमा लागेको समय भन्दा गुणस्तरिय छपाई, सन्तुलित समाचार सामाग्री, नियमितता अहिलेको उत्तरगया दैनिकमा पाइरहेको छु । हिजो यही पत्रकारिता क्षेत्रको तीन जनाले मेरिमेट्दा गर्न नसेको काम र दिन नसकेको गुणस्तर अहिले शिव देवकोटा एक्लै ‘ख्यालख्यालमै’ गरिरहेका छन् । ख्यालख्यालमै किन पनि हो भने उनी दैनिक पत्रिकासंगसंगै दशकैं पुरानो साप्ताहिक पत्रिका नुवाकोट जागरण पनि बजारमा पठाउ भ्याइरहेका छन्, अझ उनैले अर्थ मासिक पत्रिका अर्थवृक्ष समेत नुवाकोटलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर प्रकाशन आरम्भ गरेका छन् । फेरि पनि उल्लेख गरे ः पत्रिका प्रकाशनको सवालमा केही कुरालाई सामान्य रुपमा लिन्छु र केही कुरालाई जिब्रो टोकेर ‘आम्मा हो’ भन्ने कित्तामा राख्छु । अहिले उत्तरगया दैनिकको सवालमा म जिब्रो टोकेर ‘आम्मा हो’ भनिरहेका छु । जनताको सू–सूचित हुने अधिकारलाई प्रत्याभुत गर्दै उत्तरगया दैनिकले अहिले जसरी आम पाठकहरुको माझमा आफुलाई प्रिय बनाईसकेको छ अहिले म यस पत्रिकाको पाठकको रुपमा रहिरहँदा बढी आनन्दित छु । उत्तरगया दैनिकको अनन्त यात्राको कामना ।
(लेखक नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा नुवाकोटका अध्यक्ष हुन् ।)
कपिलदेव खनालको लकडाउन डायरी
यसरी सम्भव भयो रेडियोबाट रिजल्ट
बैशाख ११, २०७७ मा नुवाकोटबाट प्रशारण हुने टिभि त्रिशुली र सात वटा एफएम रेडियोहरूबाट एउटा विद्यालयको बार्षिक परीक्षफलको नतिजा सार्वजनिक भयो । नुवाकोटको सन्र्दभमा विल्कुलै फरक अनुभव र प्रयोगको रुपमा रहेको आम सञ्चारका माध्यमबाट विद्यालयको परीक्षाफल सार्वजनिक गर्ने प्रयास सम्भवत अन्यत्र पनि नभएको वा कमै भएको हुनुपर्छ । विश्व महामारीको रुपमा रहेको कोभिड(१९ अर्थात् कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन चैत ११, २०७६ देखि अहिलेसम्म नेपाल लकडाउन (बन्दाबन्दी) मा छ । नेपाल मात्रै होइन विश्वका लगभग सबै देशहरू अहिले लकडाउनको अवस्थामा छ । मानिस–मानिस बीचको भौतिक वा शारिरिक दुरी कायम गर्नका लागि गरिएको लकडाउनले सबै क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष प्रभावित पारिरहेको छ । यो अवस्थामा नियमित हुने पर्ने काम, गतिविधि, अभियान ठप्प प्रायः छ ।
विदुरमा रहेको पृथ्वी मावि बर्षेनी एसईई परीक्षामा सर्वोकृष्ट नतिजा सहित तारिफको केन्द्रमा रहँदै आएको छ । एक दशक भन्दा पनि कम समयमा गरिएको सुधारमुखी ब्यवस्थापनले पृथ्वी माविलाई ‘यहाँबाट त्यहाँ’ पु¥याएको छ । विद्यार्थी, अभिभाव, शिक्षा र नतिजाका लागि ‘क्रियटिभ’ काम हुँदै आएको पृथ्वी माविका प्रधानाध्यापक बाबुराम लामिछाने एक किसिमको औडाह र उकुसमुकुसमा हुनुहुँदो रहेछ । बैशाख १० गते राती मलाई फोन आयो । परीक्षाको नतिजा तयार पारेर राखिएको तर अभिभावक र विद्यार्थीहरू माझमा एकै साथ पु¥याउने बिकल्पको खोजीमा उहाँ हुनुहुँदो रहेछ । विद्यालयमा नतिजा टाँस गरेर सामाजिक सञ्जालमा राख्ने विकल्प उहाँसित थियो । तर त्यो गर्दा पनि आम अभिभावकहरू ईन्टरनेटको पहुँचमा नरहेकोले कम प्रभावकारी हुने बुझाई उहाँकै देखियो । फेरि अभिभावकहरू बन्दाबन्दी छल्न र जीवन सहज पार्न विदुर र आसपासलाई छाडेर आफ्नो पुख्यौली ठाउँ वा गाउँतिर फर्किएको अवस्था पनि छ । यो अवस्थामा एफएम रेडियोलाई प्रयोग गरेर नतिजा प्रकाशन गर्ने तरिका मैले उहाँलाई सुझाएँ । उहाँ तुरुन्तै तयार देखिनुभयो र सुरु भयो रेडियोबाट विद्यालयको नतिजा प्रकाशन गर्नका लागि गृहकार्य ।
एफएम रेडियोबाट कुनै विद्यालयको नतिजा सार्वजनिक गर्नु एउटा क्रमभङ्गता थियो । मानिसहरूले के भन्छन्, वा कुन कुन कोणबाट बहश हुनसक्दा भन्ने सामान्य आँकल पनि मनमनै नगरेको होइन । तर अहिलेको अवस्थामा यही तरिका बढि सान्र्दभिक ठानें । भर्खरै सुरु भएको नुवाकोट रेडियो सञ्जालका सदस्य रेडियोहरूलाई यो प्रस्ताव पठाएँ, सबैले सहर्ष स्विकार गर्नुभयो । सातवटा एफएम रेडियोहरू रेडियो त्रिशुली, रेडियो जालपा, नुवाकोट एफएम, रेडियो सञ्जिबनी, मिक्स एफएम, गज्जवको रेडियो र रेडियो भैरबीमा एकैसाथ परीक्षाको नतिजा प्रशारण गर्ने आन्तरिक सहमती जुट्यो । सबैको अनुकल समय अपरान्ह साढे चार बजे उपयुक्त भएपछि स्कुलका प्रधानाध्यापक बाबुराम सरलाई समय प्रस्ताव गरेँ । नतिजलाई पुनः हेर्ने र अन्तिम रुप दिँदा दिउँसोको समय नै उपयुक्त हुने भएपछि उहाँहरू नतिजालाई अतिम रुपम दिनतिर लाग्नु भयो, हामी रेडियोमा प्रशारण गर्नका लागि चाहिने तरतम्य तिर लाग्यौं । विद्यालयमै गएर रेकर्ड गर्ने, विद्यालयबाटै टेलिफोन प्रयोग गरेर प्रत्यक्ष प्रशारण गर्ने, स्टेशनमै बोलाएर प्रत्यक्ष प्रशारण गर्ने वा स्टेशटमा उहाँहरूलाई बोलाएर रेकर्ड गरेर साढे चार बजे प्रशारण गर्ने । हामीसति यही विकल्पहरू थिए । यसमध्यै एउटा विकल्प छनौट
गरेर त्यसको तयारी तिर लागियो । त्यसबेलासम्म फोनमै भइरहेको सम्वाद, तयारीले अन्तिम रुप लिने बेला करिव दिउँसोको १ बज्नै लाग्दा भयो ।
प्रधानाध्यापक बाबुराम लामिछाने र सहायक प्रधानाध्यापक विश्वराज भट्टराई रेडियो त्रिशुलीको स्टेशनमा आउनु भयो । यो बीचमा मेरो योजना केही फेरिसकेको थियो । रेडियोबाट मात्रै किन टेलिभिजनबाट पनि प्रशारण गरु भनेर तयारी सुरु गरिसकेको थिएँ । टिभि त्रिशुली र रेडियो त्रिशुलीको स्टेशन एकैठाउँमा भएरै मलाई सजिलो भइरहेको थियो । टिभिका समाचार प्रमुख भाई सुजित भण्डारीलाई स्टेशनमा बोलाएर रेडियोमा प्रस्तुत गर्ने विद्यालयको बार्षिक परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रमलाई रेडियोकै स्टेशनमा छायाङ्कन गर्ने भनिसकेको थिए । रेडियो त्रिशुलीका प्राविधिक बहिनी प्रितिका थापा तयारी अवस्थामा थिए । टिभिको ‘लाइट’लाई रेडियोको स्टुडियोमा सार्ने काम भइसकेको थियो । यी सबैको जोरजम्मा र व्यवस्थापनका लागि रेडियोका स्टेशनम्यानेजर शर्मिला उप्रेती लागेका थिए ।
प्रधानाध्यापक बाबुराम सर र सहायक प्रधानाध्यापक विश्वसरले रेडियोको स्टुडियोमा बसेर नतिजा रेकर्ड गर्नुभयो । विश्वसरसित एफएम रेडियोमा लामो समयसम्म कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको अनुभवका कारण पनि झन् सजिलो भयो । मलाई मनमनै भइरहेको खुल्दुली चाँही अनुत्र्तिण हुने विद्यार्थीहरूको नाम यसरी आम सञ्चारका माध्यामबाट भन्दा विद्यार्थीमा के चोट पर्ला भन्ने थियो, तर उहाँहरूको तयारी उत्र्तिण विद्यार्थीको नाम र प्राप्ताङ्क मात्रै भन्ने गरि भएको रहेछ । मेरो कौतुहलता पहिलो कक्षाको नतिजा सुन्दा नै शान्त भयो । करिव साढे १ बजेतिर सकिएको रेकर्डिङलाई साढे चार बजेबाट सात वटै एफएम रेडियो, टिभि त्रिशुलीमा एकसाथ प्रशारण गरियो । संगै टिभिको युटुयुव च्यानल, रेडियोहरूको अनलाईन पेज, फेसबुक पेजबाट पनि प्रशारण भए ।
प्रशारण सुरु भएसंगै अधिकांश टिप्पणीहरू सकारात्मक आए । ओहो ! लकडाउनले नतिजा पनि सार्वजनिक गर्न पाइएन भनेर बसेका हामीलाई यो सिकाईको रुपमा रह्यो, हामीले पनि यसरी गर्दा त हुने रेछ नि भन्ने केही विद्यालयका शिक्षकहरू पनि भेटिनु भयो । अब उहाँहरूले यसै गरी नतिजा सार्वजनिक गर्नुहुन्छ वा कसो गर्नुहोला, तर रेडियोकर्मको केही वर्षको यो समयमा लकडाउनकै बहानामा भएपनि नयाँ अनुभव प्राप्त गर्ने अवसर प्राप्त गरें । नयाँ काम र अनुभव सृजनाका सहयात्री हुनुहुन्छ : रेडियो जालपाका जगदीश खनाल, रेडियो भैरबीका देवचन्द्र भट्ट, नुवाकोट एफएमका श्रीराम अधिकारी, रेडियो सञ्जवनीका गमला लामा, मिक्स एफएमका रुपा अर्याल, विष्णु अधिकारी र गज्जवको रेडियोका पुरुषोत्तम बस्नेत ।
लकडाउनमा मेरो दैनिकी
चैत ११ गतेदखि हामी निरन्तर लकडाउनमा छौं । यो विश्वव्यापी महामारीको समयमा हामी पत्रकाहरूको भूमिका र जिम्मेवारी झन् थपिएको छ । यस्तो अवस्थामा लडकाउनलाई बहाना बनाएर नागरिकहरूको सू–सुचित हुने अधिकारलाई कुण्ठित पार्न हामीले कुनैपानि अवस्थामा सक्ने कुरै भएन ।
त्यस कारणले कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित रहने स्वासथ्य उपायाहरूलाई अवलम्व गर्दै हामी नुवाकोटका पत्रकारहरू निरन्तर काममा छौं । म पनि व्यक्तिगत रुपमा यसै गरी सुरक्षित रहेर काममा र लागिरहेको छु । कोरोना भाइरसको अहिलेको जिल्लाको अवस्था, सरकारले नागरिकहरूको स्वास्थ्य र ज्यानको सुरक्षाका लागि गरिरहेको कामको बारेमा नागरिकहरूलाई जानकारी गराउने, नागरिकहरूको अवस्था, आवश्यकता र अपेक्षालाई सम्वन्धित पक्षसम्म पु¥याउने काममा सक्रिय रहेको छु ।
आजभोली जिल्लामा अन्य गतिविधिहरू नभएका कारण काममा केही होला भएपनि जोखिमपूर्ण अवस्था रहेकोले सावधानी अपनाउँदै र मुल्यका हिसाबले अधिक र सार्वजनिक चासोेका विषयमा समाचार संकलन, समाचार संकलनका लागि फिल्डमा जाने साथीहरूको व्यवस्थापनमा दैनिकी खर्चिरहेका छु । चैत ११ गतेभन्दा अघिको अर्थात् लकडाउन भन्दा पहिलाको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा मेरो दैनिकी र काममा खासै कमी आएको छैन ।
ठिक समयमा ठिक जानकारी दिनका लागि झन् चनाखो र तयारी अवस्थामा रहनु पर्ने अहिलेको अवस्था छ । त्यही रुपमालाई आफुलाई ‘हाई अलर्ट’मा राखेको छु ।
बिहान ६ बजेदेखि बेलुकी साढे सातबजेसम्म कार्यालयमा बिताउने गरेको छु, सम्भावन भएसम्मका रिपोर्टिङ्ग र समाचार संकलन सामाजिक सञ्जाल र टेलिफोन प्रयोग गरेर गरिरहेको छु, सकेसम्म घर र अफिस बाहिर निस्किएको छैन । मलाई चाँही आफुले काम गर्ने सञ्चार गृहको कार्यालय र मेरो निवास एउटै घरमा भएकोले बढि सजिलो भएको छ ।
समाचारश्रोत र अन्य व्यक्तिहरूलाई समेसम्म कार्यालयमा नआउनका लागि अनुरोध गरिरहेको छु, म कार्यरत सञ्चारगृहका अन्य साथीहरूलाई पनि घरकै एकान्तबासमा रहेका काम गर्न चैत ११ गतेदेखि पठाएको छु । प्रायः साथीहरू घरबाटै काम गरिरहेका छन् ।
टिभि त्रिशुली र रेडियो त्रिशुली बिहान ५ बजेदेखि राती १० बजेसम्म नियमित प्रशारणमा छन् । मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरू कटौती गरेर समाचारमुलक कार्यक्रम र समाचार बुलेटिनलाई प्राथमिकताका साथ प्रशारण गरिरहेको छु । कोरोना भाइरसको फैलदो त्रास र नेपालमा पनि कोरानो संक्रमितको संख्या बढ्न थालेसंगै समाज, समुदाय र नागरिकहरूलाई सहि सूचना सही समयमा दिनका लागि मेरै पहलमा नुवाकोट जिल्लाका सात वटा एफएम रेडियोहरूले कोरानो अपडेटलाई दैनिक रुपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । नुवाकोट अपडेट नाम दिइएको त्यो आधा घण्टाको दैनिक रेडियो कार्यक्रमको तयारी, उत्पादन र प्रशारणका लागि दैनिक दुई घण्टा समय खर्चिदै आएको छु । जुन कार्यक्रमलाई कोरोना भाइरसको संक्रमणको दृष्टिबाट नुवाकोट अवस्था, त्यसको रोकथाम र नागरिकहरूको हिफाजतका लागि सरकारी र गैर सरकारी पक्ष अनि सचेत व्यक्तिहरूले गरिरहेको गतिविधिलाई जस्ताकोतस्तै प्रस्तुत गर्दै आएको छ । यही काम र जिम्मेवारीका कारण आजभोलिको लकडाउनमा पनि मेरो दैनिकी र दिनचर्यामा खास फुर्सद निस्किएको छैन ।
जिल्लामा कार्यरत पत्रकार साथीहरूसंग सामाजिक सञ्जाल र टेलिफोन मार्फत् जोडिरहेको छु, एक पटक जिल्लाका सञ्चालित प्रायः विद्युतिय सञ्चार माध्यामका कार्यालयहरू हेर्न र साथीहरूलाई भेट्न पुगें । त्यस बाहेक अन्य समयमा समाचार संकलनका लागि बाहिर निस्कदा साथीहरूसंग भेटघाट भइनै रहेको छ ।
नुवाकोटका पत्रकारहरु कर्तव्य र काममा निरन्तर
हामी अहिले कुरा गरिरहेको समयको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने विश्वभरी एक लाख नौं हजारको मृत्यु भइसकको छ । कोरोना भाइरसबाट झण्डै १८ लाख मानिसहरू संक्रमिण भएका छन् । यस्तो डरलाग्दो अवस्थामा हामी नेपाली र फ्रण्टलाइनमा रहेका काम गर्ने पत्रकारहरू चाहि जोखिममा नपर्ने त कुरै भएन । नेपालमै पनि आज आइतवारसम्ममा १२ जना व्यक्तिहरू कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएको पुष्टि भइसकेको छ । यस हिसावले पनि नेपाल विस्तारै असुरक्षित बन्दै गएको महशुस गरेको छु ।
सिङ्गै मानव जातीको अस्तित्वनै संकटमा पर्न सक्ने यो विश्व महामारीलाई फैलन नदिन र मानविय क्षति कम गर्नका लागि अहिले भइरहेको लकडाउनले पक्कै पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ जस्तो मलाई लागेको छ । सरकारले चैत ११ गतेदेखि गरिरहेको बन्दाबन्दीलाई नागरिकहरूले सहर्ष स्विकार गरेका छन् । नुवाकोटमा पनि यस्तै अवस्था छ । पहिला विश्व महामारीको रुपका विकास भएको कोरानो भाइरसेको संक्रमण समुदायमा समाजमा छैन भन्ने निक्यौल होस् अनि मात्रै दैनिकीमा फर्कने मनस्थितिमा जिल्लाको नागरिकहरूलाई पाएको छु । यस अवस्थामा परिहेको समस्या र गुुम्फनलाई नागरिकहरूले उत्तिसाह्रो पिडाका रुपमा मानेका छैनन् ।
यस अवस्थामा जिल्लाका पत्रकारहरूको भुमिका र सक्रियतालाई नागरिक समाजले, आम श्रोता, पाठक, दर्शकले मुल्याङ्कन गर्ने हो । हामी निरन्तर समाचार र जानकारी स्ंकलन अनि प्रबाहमा छौं । चैत १० गते र त्यसपछिको दिनदेखि अहिलेसम्म जिल्लामा काम गरिहरनुभएका पत्रकारहरूको गतीका खास कुनै परिवर्तन छैन । एक किसिमले भन्नुपर्दा आफ्नो स्वास्थ्य र शरिरलाई जोखिममा राखेर नुवाकोटका अधिकांश पत्रकार साथीहरू र अग्रहजहरूले गरिरहनुभएको काम प्रशंसनिय र लोभलाग्दो छ । २०७२ साल बैशाख १२ गते र त्यपछिका भुकम्पहरूमा जसरी जिल्लाका सञ्चार गृह र पत्रकारहरूले आफ्नो कर्तब्यलाई पुरापुर पालन गरेर सिङ्गै नागरिक समाजको तर्फवाट प्रशंसा बटुलेको थियो, अहिले पनि नुवाकोटका पत्रकारहरू यसै गरी आफ्नो कर्तव्य र काममा निरन्तर प्रशंसा बटुलेको थियो, अहिले पनि नुवाकोटका पत्रकारहरू यसै गरी आफ्नो कर्तव्य र काममा निरन्तर छन् ।
लकडाउनको यो अवधिमा हामीलाई समाचार संकलन र सम्प्रेषणमा कुनै अवरोध छैन । स्वाभाविकै हो हिजो सहज दिनमा जत्तिनै पत्रकार साथीहरू बाहिर फिल्डमा कुद्नुभएको छैन, बाहिर नदेखिने साथीहरू घरभित्रै रहेर र कार्यालयमा एकान्तबास बनाएर काम गरिहरनु भएको छ । जिल्लाबाट प्रशारण हुने टेलिभिजन रेडियो र प्रकाशन हुने सबै अनलाई पत्रिकाहरू नियमित छन् । कही कतैबाट कुनै साथीहरूले काम गर्न समस्या भयो भनेर गुनासो गुर्नभएको छैन । अधिकांशसित म पनि दैनिक रुपमा जोडिरहको छु टेलिफोन र सामाजिक सञ्जाल मार्फत्, उहाँहरू आफ्नो काममा सक्रिय नै हुनुहुन्छ । दैनिक र साप्ताहिक पत्रिकाहरूको प्रकाशनचाँहि अहिले नुवाकोटमा पूर्ण रुपमा बन्द भएको छ । पत्रिका प्रकाशनका लागि धेरै पक्ष र जनशक्ति एकैठाउँमा हुनु पर्ने र तारतम्य मिल्नुपर्ने कारणले यो समस्या भएको हो । पत्रपत्रिका नियमित हुननसक्नेमा नुवाकोट मात्रै होइन यो राष्टिूय रुपमै समस्या भइरहेको छ ।
फिल्डमा दौडधुप गरिरहनुहुने पत्रकार साथीहरूलाई सहयोग र सद्भाव राख्ने सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरू पनि छन् । यही अवस्थाको आँकलन गरेर हामीले चैत ७÷८ गतेतिर पत्रकारले कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित हुँदै काम गर्ने सन्र्दभमा पत्रकार महासंघमै बसेर छलफल पनि गरेका थियौं । सुरक्षाको उपाया थाहा पाएका तर सामाग्री नभएका हामीलाई निजी तथा सार्वजनिक संस्थाहरूले अत्यावश्यक सामाग्रीहरू केही मात्रामा भए पनि उपलब्ध गराउनु भएको छ । जसले गर्दा हामीलाई केही भए पनि सहजता मिलेको छ ।
सम्रगमा नुवाकोटका सञ्चार माध्याम र पत्रकारहरू आम नागरिकहरूको स्वास्थ्य अनि जीवनको सुरक्षाका लागि अहिलेको परिस्थितिमा आवश्यक पर्ने सूचना र जानकारी संकलन गरेर विद्युतीय सञ्चार माध्यामबाट प्रेषित गरिरहेका छन् । जिम्मेवारीबाट नुवाकोटका पत्रकारहरू चुकेका छैनन् ।
मेरो एक परिचित र म
मिथिलेश आदित्य, अररिया, बिहार, भारत ( अनु— विवश पोखरेल )
अँध्यारोमा सलाई पाइरहेको थिएन
उसलाई दियो बाल्नु थियो
मसँग सलाई थियो
मैले उसको दियो बालिदिएँ
उज्यालो भयो उसको घर
उसले सलाई भेट्यो
र मैले बालेको दियो निभाइदियो
आफ्नो सलाईले दियो बाल्यो ।
फेरि उसले विनम्रतासँग
मसँग सलाई माग्यो
मैले मित्रतावश उसलाई
आफ्नो सलाई दिएँ
उसले बलिरहेको दियोमा
मेरो सलाई जलाइदियो
र मसँग हातमिलाउँदै भन्यो—
सुन्दर कविता लेख न मित्र
तिमी कविहरू त —
एक कप चियामा पनि
कविता लेख्छौ, सुनाउँछौं
मसँग विदाहुँदै भन्यो—
फेरि भेटौंला कुनै दिन
भेट्दै गर्नु ÷ आउँदै गर्नु फोन–सोन गर्दै गर्नु
आज म ती परिचितमाथि
कविता लेख्न बसेको छु सोच्दैछु,
कस्तो कविता लेखूँ ?
उज्यालोको कविता लेखूँ
कि अँध्यारोको ?
समानताको कविता लेखूँ
कि स्वार्थको ?
दम्भको कविता लेखूँ
कि शालीनताको ?
अभिव्यक्ति पूर्णङ्क २०१ बाट साभार
► June 19 - June 26 (18)
► June5- June 12 (16)
► April 17 - April 24 (21)
► March 27 - April3(24)
► March 1 - March 8 (42)
► February 16 - February 23 (16)
► February9- February 16 (16)
► January 19 - January 26 (21)
► January 12 - January 19 (24)
► January5- January 12 (41)
► December 8 - December 15 (23)
► December 1 - December 8 (28)
► November 24 - December 1 (25)
► November 17 - November 24 (15)
▼ November 10 - November 17 (18)
► November3- November 10 (36)
► October 20 - October 27 (34)
► September 1 - September 8 (14)
► August6- August 13 (17)
► March 11 - March 18 (20)
image weekly (इमेज साप्ताहिक)
नुवाकोट, बागमती प्रदेश, Nepal
यो नुवाकोट जिल्लाबाट सोमवार प्रकाशन हुँदै आएको इमेज साप्ताहिकको ब्लग हो । २०६३ साल माघ १६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटमा दर्ता भएको यस पत्रिकाको प्रकाशन सुरुवात मासिकबाट गरेको हो । २०६६ साल असोज ५ गतेदेखि साप्ताहिक रुपमा नियमित प्रकाशन हुँदै आएको इमेज साप्ताहिक २०६७ सालदेखि प्रेस काउन्सिल नेपालको पत्रपत्रिका बर्गिकरणमा पर्दै आएको छ । सुरुको बर्ष ‘ग’ बर्गमा रहेको यो पत्रिका प्रेस काउन्सिल नेपालको २०६८ सालदेखि ‘ख’ बर्गमा पर्दै आएको छ । प्रकाशकः कपिलदेव खनाल, सम्पादक: शर्मिला उप्रेती, सहसम्पादक: सुजित भण्डारी, प्रमुख समाचारदाता: प्रितिका थापा, कार्यालयः विदुर नगरपालिका वडा नं. ४ विदुर नुवाकोट, फोनः ०१०–५६१६७८, ०१०–५६०७८९, ९८५१०९३२९०, जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोट दर्ता नं. : १६/२०६३/०६४, स्थायी लेखा नम्बर ३०४४८९३२९, मुद्रण : गोसाइँकुण्ड अफसेट प्रेस, विदुर नगरपालिका वडा नं. ४ विदुर नुवाकोट फोन नं. ०१०–५६१०७१